CRF နှင့် CRF နှင့်ဆက်နွယ်နေသည့်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှု၏မှောင်မိုက်သောနေရာတွင်မူးယစ်ဆေးဝါး၏အခန်းကဏ္ ((၂၀၁၄) - သင့် ဦး နှောက်ပေါ်၌အပြောက်
ဦးနှောက် Res ။ စာရေးသူလက်ရေးမူများမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်; PMC ဖေဖော်ဝါရီ 16, 2011 အတွက်ရရှိနိုင်ပါ။
ဦးနှောက် Res ။ ဖေဖော်ဝါရီ 16, 2010; 1314C:3။
နိုဝင်ဘာ 11, 2009 အွန်လိုင်းထုတ်ဝေသည်။ Doi: 10.1016 / j.brainres.2009.11.008
မူးယစ်ဆေးစွဲမူးယစ်ဆေးဖယ်ရှားချိန်တွင်မူးယစ်ဆေးဝါး, မှီခို၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်အပျက်သဘောဆောင်သောစိတ်ခံစားမှုပြည်နယ်တို့၏ပေါ်ထွန်းခြင်းရှာယူနေတဲ့မလှူဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာတစ်ခုနာတာရှည် relapsing ရောဂါဖြစ်ပါတယ်။ ဦးနှောက်ကဖိစီးမှုစနစ်များ activation စွဲ၏ "မှောင်မိုက်ဘက်" အဖြစ်သတ်မှတ်အနုတ်လက္ခဏာအားဖြည့်ယန္တရားများ, မှတဆင့်မူးယစ်ဆေးဝါးရှာဖွေလျက်မောင်းနှင်ကြောင်းမှီခိုအားဖြင့်ထုတ်လုပ်အနုတ်လက္ခဏာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြည်နယ်၏အဓိကဒြပ်စင်ဖြစ်တွေးဆသည်။ ပစ္စုပ္ပန်ပြန်လည်သုံးသပ်များ၏အာရုံစိုက် corticotropin-releasing အချက် (CRF) နှင့်စွဲလမ်း၏အမှောင်ဘက်ခြမ်းအတွက် CRF-related peptides ၏အခန်းကဏ္ဍကိုအပေါ်ဖြစ်ပါတယ်။ CRF ဖိအားဖို့ဟော်မုန်း, ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ, နှင့်အပြုအမူတုံ့ပြန်မှုတစ်ခု key ကိုဖျန်ဖြေသည်။ အလေးပေးစွဲ၏အမှောင်ဘက်ခြမ်း၌, stria terminalis ၏အိပ်ရာနျူကလိယက, amygdala ၏ဗဟိုနျူကလိယအပါအဝင်တိုးချဲ့ amygdala အတွက် extrahypothalamic စနစ်များအတွက် CRF ၏အခန်းကဏ္ဍကိုအပေါ်ထားရှိလျက်, နျူကလိယ accumbens ၏ shell ကိုတစ်ဦးအကူးအပြောင်းဧရိယာဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ urocortin / CRF2 စနစ်များကိုလျော့နည်း Explorer ပါပြီ, ဒါပေမယ့်ရလဒ်များကိုတစ်ခါတစ်ရံ CRF ကထုတ်လုပ်သည့်သက်ရောက်မှုမှအတိုက်အခံထဲမှာနာတာရှည်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ neuroadaptation ၎င်းတို့၏အခန်းကဏ္ဍအကြံပြု1 အဲဒီ receptor ။ ဆွဲဆောင်မှုအထောက်အထား hypothalamic-pituitary-adrenal ဝင်ရိုး၎င်း၏ activation အပါအဝင် CRF စိတ်ဖိစီးမှုစနစ်,, မှီခိုဖို့အကူးအပြောင်းပါဝငျကြောင့်အစပျိုးနေသည်တစ်ချိန်ကမှီခိုထိန်းသိမ်းခြင်းအတွက်သော့ချက်အခန်းကဏ္ဍဖြစ်သည်။ စောဒကတက်သည် စွဲလမ်းအတွက် CRF စနစ်များ၏အခန်းကဏ္ဍကိုနားလည်ခြင်းစွဲ၏အမှောင်ဘက်ခြမ်း၏ neurobiology သို့ထိုးထွင်းသိမြင်မှုပေးသည်, ဒါပေမယ့်လည်းစွဲနှင့်စွဲလမ်း၏ကုသမှုမှအားနည်းချက်ဖော်ထုတ်ဘို့ဝတ္ထုပစ်မှတ်ကိုထောက်ပံ့ပေးမသာ။
အယူအဆရေးရာမူဘောင်: စွဲ, စိတ်ဖိစီးမှု, နှင့်အမှောင်ဘေးထွက်
မူးယစ်ဆေးစွဲ (ဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာဟာနာတာရှည် relapsing ရောဂါiမူးယစ်ဆေးရှာယူမှ) မလှူ, (ii) စားသုံးမှုကန့်သတ်အတွက်ထိန်းချုပ်မှုဆုံးရှုံး, နှင့် (iiiအပျက်သဘောဆောင်သောစိတ်ခံစားမှုပြည်နယ်၏) ပေါ်ပေါက်ရေး (ဥပမာ dysphoria, စိုးရိမ်စိတ်, စိတ်တိုတာတွေ) ကိုမူးယစ်ဆေးဝင်ရောက်ခွင့်တားဆီးအခါတစ်ဦးစိတ်ခွန်အားနိုးဆုတ်ခွာ syndrome ရောဂါထင်ဟပ် (မှီခိုအဖြစ်ဤနေရာတွင်သတ်မှတ်) (Koob နှင့် Le Moal, 1997,Koob နှင့် Le Moal, 2008) ။ စွဲသုံး stages- ပါဝင်သည်တစ်ခုဖြစ်ပေါ်နေသောရောဂါအဖြစ် conceptualized ထားပြီးအဆက်မပြတ် / မျှော်လင့်, မူးရူး / မူးယစ်နှင့် ဆုတ်ခွာ / အနုတ်လက္ခဏာကိုထိခိုက်အရာနှစ်ဆပိုများလာ Impulse မကြာခဏအစောပိုင်းအဆင့်မှာလက်ဝါးကြီးအုပ်ချယ်လှယ်ခြင်းနှင့် compulsive terminal ကိုအဆင့်ဆင့်မှာလက်ဝါးကြီးအုပ်ချယ်လှယ်။ compulsive မှ Impulse ထံမှတစ်ဦးချင်းရွေ့လျားအဖြစ်တစ်ဦးပြောင်းကုန်ပြီ (ထိုလှုံ့ဆော်မှုအပြုအမူကားမောင်းအနုတ်လက္ခဏာအားဖြည့်ဖို့စိတ်အားထက်သန်အပြုအမူကားမောင်းအပြုသဘောအားကောင်းရာမှဖြစ်ပေါ်Koob, 2004) ။ အနုတ်လက္ခဏာအားဖြည့်ထားတဲ့ဆန္ဒရှိလှုံ့ဆော်မှု (မူးယစ်ဆေးဆုတ်ခွာ၏ဥပမာအနုတ်လက္ခဏာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြည်နယ်) ၏ဖယ်ရှားရေးတစ်တုံ့ပြန်မှု (ဥပမာ, မှီခို-သွေးဆောင်မူးယစ်ဆေးစားသုံးမှု) ၏ဖြစ်နိုင်ခြေကိုတိုးပွားစေတော်မူသောအားဖြင့်ထိုလုပ်ငန်းစဉ်အဖြစ်သတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။ ဤသုံးပါးအဆင့် ( ပို. ပြင်းထန်သောဖြစ်လာ, တစ်ဦးချင်းစီကတခြားတွေနဲ့အပြန်အလှန်အဖြစ် conceptualized နှင့်နောက်ဆုံးတွင်စွဲအဖြစ်လူသိများသည့်ရောဂါဗေဒပြည်နယ်မှဦးဆောင်နေကြKoob နှင့် Le Moal, 1997).
ပစ္စုပ္ပန်သုံးသပ်ချက်စွဲသံသရာ (ဆိုလိုသည်မှာအဆိုပါ၏ "မှောင်မိုက်ဘက်" အဖြစ်ဖော်ပြထားခဲ့ပြီးဘာ corticotropin-releasing အချက် (CRF) ၏အခန်းကဏ္ဍအပေါ်အလေးပေး ဆုတ်ခွာ / အနုတ်လက္ခဏာကိုထိခိုက် အဆိုပါစွဲသံသရာနှင့်များ၏ဒြပ်စင်ဇာတ်စင် အဆက်မပြတ် / မျှော်လင့်စင်ပေါ်မှာ) ။ ကွဲပြားခြားနားသောမူးယစ်ဆေးဝါးစွဲသံသရာ၏ကွဲပြားခြားနားသောအစိတ်အပိုင်းများအပေါ်အလေးပေးနှင့်အတူစွဲ၏ကွဲပြားခြားနားသောပုံစံများထုတ်လုပ်ပေမယ့်အားလုံးစွဲလမ်းမူးယစ်ဆေးစွဲ၏အမှောင်ဘက်ခြမ်းမှသက်ဆိုင်ရာအချို့သောဘုံ element တွေကိုပြသပါ။ ဘုံဒြပ်စင်လေးနက်အကျပ်အတည်းများကြောင့်သာဖြစ်လေသည်, dysphoria နှင့်ဆုတ်ခွာစဉ်ကစိုးရိမ်ပူပန်နေတဲ့ low-level စိုးရိမ်စိတ် / dysphoric ပြည်နယ်နှင့်တစ်ဦးစူးရှသောဖိအားအကြောင်းမဲ့လာသောအခါပြန်သွားကြသည်မှမြင့်မားသောအားနည်းချက်အားဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာအလွန်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီး abstinence syndrome ရောဂါပါဝင်သည်။ CRF စူးရှရုပ်သိမ်းရေး, ပေါ်ထွက်လာသောကြောင့်ရှည်ကြာ abstinence ၏စိုးရိမ်ပူပန်မှု / စိတ်ဖိစီးမှုကဲ့သို့သောဆိုးကျိုးများနှင့်ဖိအားများကသွေးဆောင်အလွန်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီး abstinence ကာလအတွင်းမူးယစ်ဆေးဝါးဆည်းပူးနေမှ relapse များ၏စိုးရိမ်ပူပန်မှု / စိတ်ဖိစီးမှုကဲ့သို့သောဆိုးကျိုးများအတွက်သော့ချက်အခန်းကဏ္ဍမှတွေးဆသည်။
အဆိုပါစွဲသံသရာ၏အမှောင်ဘက်ခြမ်းအစိတ်အပိုင်းအတွက် CRF ၏အခန်းကဏ္ဍကိုတစ် neurocircuitry ရှုထောင့်ကနေမူးယစ်ဆေးစွဲ၏ neurobiology ၏ domains များသို့တိုးချဲ့ခဲ့သည့်ပြိုင်ဘက်ဖြစ်စဉ်ကိုသီအိုရီအပေါ် predicated ဖြစ်ပါတယ်။ ဦးနှောက်ကိုစိတ်ခွန်အားနိုးစနစ်များတစ်ခု allostatic မော်ဒယ် (စွဲလမ်းအတွက်မှီခိုနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသောလှုံ့ဆျောမှုအတွက်အမြဲတမ်းအပြောင်းအလဲရှင်းပြဖို့အဆိုပြုပြီးပါပြီKoob နှင့် Le Moal 2001,Koob နှင့် Le Moal 2008) ။ ဒီရေးဆွဲရေးအတွက်, စွဲမူးယစ်ဆေးဝါးများ၏ compulsive အသုံးပြုရန်ပံ့ပိုးနေတဲ့အနုတ်လက္ခဏာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြည်နယ်အတွက်ရလဒ်များကြောင့်ဦးနှောက်ကိုဆုလာဘ် / Anti-ဆုလာဘ်ယန္တရားများ၏တိုးပွားလာ dysregulation တစ်သံသရာအဖြစ် conceptualized ဖြစ်ပါတယ်။ ဆုလာဘ် function ကို၏ပုံမှန် homeostatic န့်အသတ်များ၏အစိတ်အပိုင်းဖြစ်ကြောင်း Counteradaptive ဖြစ်စဉ်များပုံမှန် homeostatic အကွာအဝေးအတွင်းပြန်လာရန်ပျက်ကွက်။ အတွင်း-system ကို neuroadaptations (ဆုလာဘ်လမ်းကြောင်းပြောင်းလဲမှုများ) နှင့်အကြား-system ကို neuroadaptations (ဦးနှောက်စိတ်ဖိစီးမှုစနစ်များ၏စုဆောင်းမှု) (ဤ counteradaptive ဖြစ်စဉ်များနှစ်ခုယန္တရားများကကမကထပြုခဲ့ခံရဖို့တွေးဆကြသည်Koob နှင့် Bloom, 1988; Koob နှင့် Le Moal, 1997, 2008) ။ CRF ဖြစ်ကောင်းထင်ရှားတဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည့်များ၏ဦးနှောက်ကိုဖိစီးစနစ်များ၏စုဆောင်းမှု, စွဲလမ်း၏ compulsive (မောင်းသောအနုတ်လက္ခဏာအားဖြည့်လုပ်ငန်းစဉ်များထဲကတစ်ခုအဓိကအစိတ်အပိုင်းကိုထောက်ပံ့ပေးKoob, 2008).
CRF ဖိအားဟော်မုန်း, ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရနှင့်အပြုအမူဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှုဖြန်ဖြေခြင်းအားဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့စိတ်ဖိစီးမှုတုံ့ပြန်မှုညှိနှိုင်းရေးအတွက်အဓိကအခန်းကဏ္ဍတစ်ခု 41-အမိုင်နိုအက်ဆစ် polypeptide ဖြစ်ပါတယ်။ CRF (ဆေးဝါးဗေဒသတ်မှတ်ရေး၏နိုင်ငံတကာယူနီယံ CRF ဖြစ်ပါတယ်ပေမယ့်လည်း, corticotropin-releasing ဟော်မုန်းချေါ) (peptide အစီအစဉ်၏ဂန္နည်းစနစ်အားဖြင့်ဖော်ထုတ်ခဲ့သည်ခြိုငျ့ et al ။ , 1981) ။ နောက်ပိုင်းတွင်, Ucn 1 နှင့် Ucn2 နှင့်အတူ 3, 1 နှင့်2(Ucn 3, Ucn 2, Ucn 3), အစ stresscopin-ဆက်စပ် peptide နှင့် stresscopin အဖြစ်ရည်ညွှန်း CRF-urocortins သုံးခု paralogs ကုဒ်သွင်းဗီဇအသီးသီး-ခဲ့ကြသည်ခေတ်သစ်မော်လီကျူးများကဖော်ထုတ် ဇီဝချဉ်းကပ်။ CRF agonists ငါး (urotensin) တွင်တွေ့နိုင်ပါသည်, ဘား (sauvagine), နှင့်နို့တိုက်သတ္တဝါများ (urocortin) ။ Urocortin ငါ (63%, "uro") နှင့်နို့တိုက်သတ္တဝါငယ်တွေ CRF (45%, "cort") urotensin ငါးကြင်းရန်၎င်း၏ sequence ကိုတူများအတွက်အမည်ရှိခဲ့သည်။ နှစျခုမှာ G-ပရိုတိန်း-coupled receptors (CRF1, CRF2) ကို CRF / Ucn peptides ကွဲပြားဆှဖှေဲ့နှင့်အတူခညျြနှောငျနှင့်ကိုသက်ဝင်အလားတူ (ဖော်ထုတ်ခဲ့ဘေးလ်နှင့်ခြိုငျ့, 2004; Fekete နှင့် Zorrilla, 2007) ။ Pharmacological နှင့် Transgene လေ့လာမှုများကြောင့်ဦးနှောက်နှင့် pituitary CRF ပြသ1 receptors (ထို CRF စနစ်၏အလုပ်လုပ်တဲ့စိတ်ဖိစီးမှုကဲ့သို့သောဆိုးကျိုးများအများအပြားဖျန်ဖြေHeinrich နှင့် Koob, 2004) ။ ကိုယျ့ကိုယျကိုနှင့်အခြားသူများအားဖြင့်ယခင်သုံးသပ်ချက်များ (CRF စနစ်များ၏ဇီဝဗေဒစစ်တမ်းကောက်ယူခဲ့ကြဘေးလ်နှင့်ခြိုငျ့, 2004; Heinrich နှင့် Koob, 2004).
CRF တစ်ဦးနှောက်တစ်လျှောက်လုံးကျယ်ပြန့်ဖြန့်ဖြူးပေမယ် hypothalamus ၏ paraventricular နျူကလိယထဲမှာဆဲလ်အသေကောင်များအထူးသဖြင့်မြင့်သောပြင်းအားသည် Basal forebrain (အထူးသတိုးချဲ့ amygdala), နှင့် brainstem (ရှိပါတယ်Swanson et al ။ , 1983) ။ CRF ဗဟိုအုပ်ချုပ်မှုကြွက်များတွင် activation နှင့်စိတ်ဖိစီးမှုဖို့အမူအကျင့်တုံ့ပြန်မှုအတုယူနှင့်ယှဉ်ပြိုင် CRF အဲဒီ receptor ရန်၏အုပ်ချုပ်မှုယေဘုယျအားဖြင့် (Anti-စိတ်ဖိစီးမှုသက်ရောက်မှုရှိပါတယ်Heinrich et al ။ , 1994; Menzaghi et al ။ , 1994; Spina et al ။ , 2000; ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းအဘို့အတွေ့ Dunn နှင့် Berridge, 1990; Koob et al ။ , 1994, 2001; Sarnyai et al ။ , 2001()စားပွဲတင် 1) ။ , CRF ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြကြောင်းနှစ်ခုကအဓိက CRF receptors ၏1 အဲဒီ receptor activation တိုးချဲ့စိတ်ဖိစီးမှုတုန့်ပြန် (Koob နှင့် Heinrich, နှင့်ဆက်စပ်နေသည် 1999), နှင့် CRF2 အဲဒီ receptor activation (နို့တိုက်ကျွေးရေးအတွက်လျှောက်လျော့နည်းနှင့်ဆက်စပ်ခြင်းနှင့်စိတ်ဖိစီးမှုတုန့်ပြန်လျော့နည်းသွားခြင်းဖြစ်သည်Spina et al ။ , 1996; Pelleymounter et al ။ , 2000; ဒါပေမယ့်ကြည့်ရှု ဟို et al ။ , 2001; Takahashi et al ။ , 2001; Fekete နှင့် Zorrilla, 2007) ။ မြောက်မြားစွာသောအသွေး-ဦးနှောက်အတားအဆီး-မထိုးဖောက်, ရွေးချယ် CRF1 အဲဒီ receptor ရန်တီထွင်, ဒါပေမယ့်ဘယ်သူမျှမသေးငယ်-မော်လီကျူးကဦးနှောက်-မထိုးဖောက် CRF ပြီ2 ရန် (ဖွံ့ဖြိုးပြီးပြီZorrilla နှင့် Koob, 2007) ။ ရလဒ်အနေနဲ့အလုပ်တစ်ခုကျယ်ပြန့်သောငွေပမာဏ CRF ၏အခန်းကဏ္ဍကို elucidate ပြုထားပြီး1 အဆိုပါ CRF အပေါ်ကန့်သတ်အလုပ်နှင့်အတူစွဲအတွက် receptors2 အဲဒီ receptor (အောက်တွင်ကြည့်ပါ) ။
ဗဟိုအုပ်ချုပ် CRF peptides ၏အမူအကျင့်အပေါ်သက်ရောက်မှုများ
ဟော်မုန်းစိတ်ဖိစီးမှုစနစ်များ: Hypothalamic-Pituitary-Adrenal ဝင်ရိုးတန်း
စွဲဖို့သက်ဆိုင်ရာအလေးပေးဖို့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့တုံ့ပြန်မှုတစ်ခုသော့ချက် element က hypothalamic-pituitary adrenal (HPA) ဝင်ရိုး, အကြီးအကျယ် hypothalamus ၏ paraventricular နျူကလိယ (ထဲမှာ CRF ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့စနစ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပုံ 1) ။ အဆိုပါ hypothalamus ၏ paraventricular နျူကလိယက, pituitary gland ၏ anterior ပေါ်၌ရှိသောအမြှေး, နှင့်သုံးသပ်ချက်ကိုများအတွက် adrenal gland (တွေ့: အဆိုပါ HPA ဝင်ရိုးသုံးခုကိုအဓိကအဆောက်အဦများ၏ဖွဲ့စည်းထားသည် Smith ကနှင့်ခြိုငျ့, 2006) ။ အဆိုပါ paraventricular နျူကလိယ၏ medial parvocellular subdivision အတွက် Neurosecretory အာရုံခံအဆိုပါ anterior pituitary gland ရိုက်ထည့်သောပေါ်တယ်သွေးကြောထဲသို့ CRF synthesize နှင့်လွှတ်လိုက်ပါ။ အဆိုပါ CRF မှ CRF ၏ binding1 pituitary corticotropes အပေါ်အဲဒီ receptor ဟာစနစ်တကျလည်ပတ်သို့ adrenocorticotropic ဟော်မုန်း (ACTH) ၏ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်းဖြစ်ပေါ်သည်။ အလှည့်အတွက် ACTH သည့် adrenal cortex ကနေ glucocorticoid ပေါင်းစပ်နှင့်လျှို့ဝှက်ချက်များကိုလှုံ့ဆော်။ အဆိုပါ hypothalamus နှင့် hippocampus ၏ paraventricular နျူကလိယ: အဆိုပါ HPA ဝင်ရိုးထုနှစ်ခုအဓိကဦးနှောက်ဧရိယာများတွင် glucocorticoid receptors အပေါ်ပြုမူကြောင်း glucocorticoids ပျံ့နှံ့နေတဲ့ကနေအပျက်သဘောတုံ့ပြန်ချက်မှတဆင့်ဖမ်းယူနားဆင်ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ hypothalamus ၏ paraventricular နျူကလိယ၏ hypophysiotropic အာရုံခံအဆိုပါ brainstem အခြား hypothalamic အရေးပါနှင့် forebrain limbic အဆောက်အဦထဲကနေအပါအဝင်မြောက်မြားစွာ afferent စီမံချက်များကြောင့် innervated နေကြသည်။
ပုံကြမ်းခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာစိတ်ဖိစီးမှုတုံ့ပြန်မှုဖြန်ဖြေအတွက် CRF ၏မျိုးစုံလုပ်ရပ်တွေကိုပုံ။ CRF အဆိုပါ pituitary ၏ပေါ်တယ်စနစ် adrenocorticotropic ဟော်မုန်း (ACTH) လွှတ်ပေးရန်ခေတ္တအားဖြင့် hypothalamic-pituitary adrenal ဝင်ရိုးမောင်း။ CRF မြှင့်လုပ်ဆောင် ...
Extrahypothalamic CRF စနစ်များ
CRF လည်းဖိအားကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရနှင့်အပြုအမူဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှုကိုထိန်းချုပ်ဖို့ HPA ဝင်ရိုး၏အပြင်ဘက်တွင်တည်ရှိသည်။ သိသိသာသာ CRF ကဲ့သို့ immunoreactivity အဆိုပါ neocortex, တိုးချဲ့ amygdala, medial septum, hypothalamus, thalamus, cerebellum, နှင့် ventral tegmental ဧရိယာအပါအဝင်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ midbrain နှင့် hindbrain အရေးပါ, (အတွင်းလက်ရှိဖြစ်ပါသည်ချာလ်တန် et al ။ , 1987; Swanson et al ။ , 1983) ။ Ucn 1 စီမံကိန်း၏ဖြန့်ဖြူး (CRF နှင့်ထပ်ဒါပေမယ့်လည်းတစ်ဦးကွဲပြားခြားနားဖြန့်ဖြူးရှိပါတယ်, အမြင်အာရုံ, somatosensory, အာရုံ, vestibular, မော်တာ, tegmental, parabrachial, pontine, ပျမ်းမျှ raphe နှင့် cerebellar အရေးပါအပါအဝင်Zorrilla နှင့် Koob, 2005) ။ အဆိုပါ CRF1 အဲဒီ receptor CRF နှင့် Ucn 1 ၏ဖြန့်ဝေနှင့်အတူသိသိသာသာထပ်နေသည်သောဦးနှောက်ထဲမှာအပေါများ, ကျယ်ပြန့်စကားရပ်ရှိပါတယ်။
အဆိုပါ endogenous ရွေးချယ် CRF2 agonists-အမျိုးအစား2urocortins Ucn2(Reyes et al ။ , 2001) နှင့် Ucn3(Lewis က et al ။ , 2001) သူတို့၏ neuropharmacological profile များကိုများတွင် Ucn 1 နှင့် CRF ထံမှ -differ ။ Ucn2နှင့် Ucn3အဆိုပါ CRF အဘို့အမြင့်မားအလုပ်လုပ်တဲ့ selection ကိုပြသ2 CRF နှင့် Ucn 1 (သူတို့ထံမှကွဲပြားဖြစ်ကြောင်း neuroanatomical ဖြန့်ဝေအဲဒီ receptor နှင့်ပြီပုံ 2) ။ Ucn2နှင့် Ucn3အဆိုပါ CRF ဖော်ပြကြောင်း hypothalamic အရေးပါအတွက်အထူးအဓိကဖြစ်ကြောင်း2 အဆိုပါ supraoptic နျူကလိယက, paraventricular နျူကလိယ၏ magnocellular အာရုံခံနှင့် forebrain, အ ventromedial hypothalamus အပါအဝင်နှစ်ဦးနှစ်ဖက် septum, အ stria terminalis ၏အိပ်ရာနျူကလိယနှင့် medial နှင့် cortical amygdala အပါအဝင်အဲဒီ receptor, (လီ et al ။ , 2002) ။ အဆိုပါ CRF2 (က) အဲဒီ receptor isoform အဆိုပါ CRF / Ucn 1 / CRF သူတို့ထံမှကွဲပြားဦးနှောက်ဧရိယာများတွင်အာရုံခံဒေသခံစံနှုန်းကိုက်ညီနေသည်1 ထိုကဲ့သို့သော ventromedial hypothalamic နျူကလိယက, hypothalamus ၏ paraventricular နျူကလိယ, supraoptic နျူကလိယ, နျူကလိယ Tractus solitarius, ဧရိယာ postrema, နှစ်ဦးနှစ်ဖက် septum, နှင့် stria terminalis ၏အိပ်ရာနျူကလိယအဖြစ်အဲဒီ receptor စနစ်, ။
နို့တိုက်သတ္တဝါငယ်တွေ corticotropin-releasing အချက်များ၏သိထား (CRF) receptors (အနီအနား), သူတို့ရဲ့ putative သဘာဝအ ligands (အစိမ်းရောင်ဘဲဥပုံ), နှင့်ဒြပ်အဲဒီ receptor ရန် (အပြာရောင်ရင်ပြင်) ။ Black ကမြှားအဲဒီ receptor ဆှဖှေဲ့ဖော်ပြသည်။ အုပ်စုဖွဲ့ ligands အမြင်ကျယ်များမှာ ...
အဆိုပါတိုးချဲ့ Amygdala ၏တည်ဆောက်: CRF ၏ Interface နှင့်စွဲလမ်းမှု၏အမှောင်ဘေးထွက်
မကြာမီက neuroanatomical ဒေတာနှင့်အသစ် functional ဖြစ်စေလေ့လာတွေ့ရှိချက်စွဲ၏အမှောင်ဘက်ခြမ်းနှင့်ဆက်စပ်သည့်စိတ်ခွန်အားနိုးဆိုးကျိုးများအများအပြားများအတွက် neuroanatomical အလွှာဟာ Basal forebrain အတွင်းသီးခြားခွဲထွက်ဖြစ်ပေါ်လာသောတစ်ဘုံအာရုံကြော circuitry ပါဝင်စေခြင်းငှါ၎င်းအယူအဆများအတွက်အကူအညီအထောက်အပံ့များပေးကြမှာ "တိုးချဲ့ချေါ amygdala "(Alheid နှင့် Heimer, 1988) ။ (ထို stria terminalis အလယ်ပိုင်း medial amygdala တို့နှင့် medial နျူကလိယ accumbens (ဆိုလိုသည်မှာ posterior shell ကို) ၏ posterior အစိတ်အပိုင်းအတွက်တစ်ဦးအကူးအပြောင်းဇုန်၏အိပ်ရာနျူကလိယ: အဆိုပါတိုးချဲ့ amygdala အများအပြား Basal forebrain အဆောက်အဦများ၏ရေးစပ်တဲ့ macrostructure ကိုယ်စားပြုတယ်Johnston, 1923; Heimer နှင့် Alheid, 1991) ။ ဤရွေ့ကားအဆောက်အဦများ (shape သုက်ပိုးပုံသဏ္ဌာန်, immunohistochemistry နှင့်ဆက်သွယ်မှုအတွက်တူညီကြAlheid နှင့် Heimer, 1988), နှင့်သူတို့ limbic cortical, အ hippocampus, basolateral amygdala, midbrain နှင့်နှစ်ဦးနှစ်ဖက် hypothalamus ထံမှ afferent ဆက်သွယ်မှုလက်ခံရရှိသည်။ ဤရှုပ်ထွေးထံမှ efferent ဆက်သွယ်မှုပု posterior medial (sublenticular) ventral pallidum, ventral tegmental ဧရိယာ, အမျိုးမျိုးသော brainstem စီမံချက်များနှင့်ဖြစ်ကောင်းအမြင်တစ်ခုအလုပ်လုပ်တဲ့ point ကနေအများဆုံးစိတ်ဝင်စားဖွယ်သည်နှစ်ဦးနှစ်ဖက် hypothalamus (ရန်စဉ်းစားဆင်ခြင်စရာ projection ပါဝင်သည်Heimer et al ။ , 1991) ။ အဆိုပါတိုးချဲ့ amygdala ၏ Key ကိုဒြပ်စင်ထိုကဲ့သို့သော dopamine နဲ့ opioid peptides အဖြစ်အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများ၏အပြုသဘောဆောင်အားဖြည့်အကျိုးသက်ရောက်မှုများ, နှင့်ဆက်စပ် neurotransmitters, ဒါပေမယ့်လည်းအနုတ်လက္ခဏာအားဖြည့်ယန္တရားနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ extrahypothalamic CRF စနစ်များကိုအဓိကအစိတ်အပိုင်းများကို (သာပါဝင်သည်Koob နှင့် Le Moal, 2005; အောက်တွင်ကြည့်ပါ)။
CRF သည် HPA ဝင်ရိုးတန်းနှင့်စွဲမှု
စွဲလမ်း၏ရှုထောင့်ကနေ, အ HPA ဝင်ရိုးအတွင်းတိုးတက်သောအပြောင်းအလဲများကိုအလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးနာတာရှည်အုပ်ချုပ်ရေးမှစူးရှသောအုပ်ချုပ်ရေးကနေအကူးအပြောင်းကာလအတွင်းလေ့လာတွေ့ရှိရသည်။ တိရစ္ဆာန်များအတွက်အလွဲသုံးစားမှုအများစုမူးယစ်ဆေး acute အုပ်ချုပ်ရေးကို (HPA ဝင်ရိုးမြှင့်လုပ်ဆောင်ခြင်းနှင့်ပထမဦးဆုံးဦးနှောက်စိတ်ခွန်အားနိုးဆားကစ်နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးဆုလာဘ်အတွက်လှုပ်ရှားမှုလွယ်ကူချောမွေ့ပြီးရလဒ်အဖြစ်ဆေးရှာကြံအပြုအမူများဝယ်ယူလွယ်ကူချောမွေ့စေခြင်းငှါPiazza et al ။ , 1993; Goeders, 1997; Piazza နှင့် Le Moal, 1997; Fahlke et al ။ , 1996) ။ စွဲလမ်း၏အမှောင်ဘက်ခြမ်းအတွက် CRF ၏အခန်းကဏ္ဍကိုများအတွက်သက်ဆိုင်ရာဤစူးရှသောအပြောင်းအလဲ (ကိုကင်း, opioids, နီကိုတင်းနှင့်အရက်၏ထပ်ခါတလဲလဲအုပ်ချုပ်ရေးနှင့်အတူကျိုးသကဲ့သို့ဖြစ်ကြပါစေသို့မဟုတ် dysregulated နေကြတယ်Kreek နှင့် Koob, 1998; Rasmussen et al ။ , 2000; Goeders, 2002; Koob နှင့် Kreek, 2007; Sharp ကနှင့် Matta, 1993; Semba et al ။ , 2004) ။ ဖိအားတစ်ခု atypical Response (opioid မှီခို၏သံသရာဖို့ဇွဲနှင့် relapse အထောက်အကူပြုဖို့တွေးဆထားသည်နှင့်နောက်ပိုင်းတွင်ဒီအယူအဆအလွဲသုံးစားမှုအခြားမူးယစ်ဆေးဝါးများတိုးချဲ့ခဲ့သည်Kreek နှင့် Koob, 1998).
အရေးကြီးသည့်စွဲလမ်းလုပ်ငန်းစဉ်၏မှောင်မိုက်ဘက်အတွက် CRF ၏အခန်းကဏ္ဍကိုအဘို့အမြင့်မား glucocorticoids ၏အဆင့်ဆင့်ပျံ့နှံ့နေတဲ့တုံ့ပြန်ချက်ကတော့ HPA ဝင်ရိုးပိတ်ထားဖို့နိုင်ပါတယ်ဒါပေမယ့် amygdala နှင့်ပါဝင်ပတ်သက်ခံရဖို့လူသိများ basolateral amygdala ၏ဗဟိုနျူကလိယအတွက် CRF စနစ်များ "sensitize" နိုငျ ဖိအားအပြုအမူတုံ့ပြန်မှု (Imaki et al ။ , 1991; Makino et al ။ , 1994; Swanson နှင့် Simmons, 1989; Schulkin et al ။ , 1994; Shepard et al ။ , 2000) ။ ထို့ကြောင့် HPA ဝင်ရိုး၏ပေမယ့် activation ကနဦးမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုတို့၏သွင်ပြင်လက္ခဏာများနှင့်စခွေငျးငှါ မူးရူး / မူးယစ် စွဲလမ်း၏စင်မြင့်, ထိုကဲ့သို့သော activation ကိုလည်းသွင်ပြင်လက္ခဏာများကြောင့် extrahypothalamic ဦးနှောက်စိတ်ဖိစီးမှုစနစ်များနောက်ဆက်တွဲ activation ဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြနိုင်ပါတယ် ဆုတ်ခွာ / အနုတ်လက္ခဏာကိုထိခိုက် ဇာတ်စင် (Kreek နှင့် Koob, 1998; Koob နှင့် Le Moal, 2005; Koob နှင့် Kreek, 2007).
စွဲလမ်းမှု၏တိရိစ္ဆာန် & Models အတွက် CRF ၏အခန်းက္ပ
မှီခိုအလားအလာနှင့်အတူမူးယစ်ဆေးဝါးနာတာရှည်အုပ်ချုပ်ရေးအတွက် HPA ဝင်ရိုးသာအပါအဝင် CRF ကကမကထပြုခဲ့စိတ်ဖိစီးမှုတုံ့ပြန်မှု, ဒါပေမယ့်လည်းဦးနှောက် extrahypothalamic စိတ်ဖိစီးမှု system ကို dysregulates ။ အလွဲသုံးစားမှုနှင့်အရက်ပါဝင်သည်၌ရှိသမျှသောမူးယစ်ဆေးဝါးများမှဘုံတုံ့ပြန်ချက်စူးရှသောဆုတ်ခွာစဉ်ကတစ်ဦး activated HPA စိတ်ဖိစီးမှုတုံ့ပြန်မှုမြင့်မားသော ACTH နှင့် corticosteroids နှင့် CRF လွှတ်ပေးရန် amygdala တိုးမြှင့်နဲ့ activated ဦးနှောက်စိတ်ဖိစီးမှုတုံ့ပြန်မှုတွင်ထင်ဟပ်။ သို့သော်စွဲ၏ထပ်ခါတလဲလဲသံသရာနှင့်အတူတစ်တုံး HPA တုံ့ပြန်မှု (က sensitized extrahypothalamic CRF စိတ်ဖိစီးမှု system ကိုတုံ့ပြန်မှုနှင့်အတူဒါပေမယ့်ဖြစ်ပေါ်Koob နှင့် Kreek, 2007; Koob, 2008).
Vivo အတွက် အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးနာတာရှည်အုပ်ချုပ်ရေးသို့မဟုတ် Self-အုပ်ချုပ်ရေးအောက်ပါစူးရှဆုတ်ခွာစဉ်အတွင်း microdialysis, ထိုတိုးချဲ့ amygdala အတွက်စိတ်ဖိစီးမှုကဲ့သို့တုံ့ပြန်မှု extracellular CRF အတွက်တိုးမြှင့်ထုတ်လုပ် (Merlo-Pich et al ။ , 1995; ရစ်ချတာ et al ။ , 2000) ။ အရက်ဆုတ်ခွာစဉ်အတွင်း extrahypothalamic CRF စနစ်များကိုမှီခိုကြွက် (များ၏ stria terminalis ၏ amygdala နှင့်အိပ်ရာနျူကလိယ၏ဗဟိုနျူကလိယအတွင်း extracellular CRF တစ်ခုတိုးလာသဖြင့်, hyperactive ဖြစ်လာMerlo-Pich et al ။ , 1995; သံလွင် et al ။ , 2002) ။ Extracellular CRF လည်း (နာတာရှည်နီကိုတင်းကနေမိုးရွာဆုတ်ခွာကာလအတွင်းဗဟို amygdala အတွက်တိုးလာဂျော့ခ်ျ et al ။ , 2007မူးရူးကင်း Self-အုပ်ချုပ်မှုကနေ), ဆုတ်ခွာ (ငလျင်နှင့် Weiss, 1999), နှင့် opioids ထံမှမိုးရွာသွန်းမှုဆုတ်ခွာ (Weiss et al ။ , 2001) နှင့် cannabinoids (Rodriguez က de Fonseca et al ။ , 1997) ။ Amygdala CRF တစ်ရှူးအကြောင်းအရာအီသနောထိတွေ့မှုကနေစူးရှဆုတ်ခွာစဉ်နှင့်မူးရူးကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေး (ထံမှလျှော့ချခဲ့သည်Zorrilla et al ။ , 2001; funk et al ။ , 2006; Koob, 2009).
အလွဲသုံးစားမှုအားလုံးအဓိကမူးယစ်ဆေးထံမှစူးရှရုပ်သိမ်းရေးနှင့်ပေါ်ထွက်လာသောကြောင့်ရှည်ကြာ abstinence အခြားဘုံတုံ့ပြန်မှုစိုးရိမ်စိတ်ကဲ့သို့တုံ့ပြန်မှုအပါအဝင်အပျက်သဘောဆောင်သောစိတ်ခံစားမှုပြည်နယ်၏ပေါ်ထွန်းခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ထိုကဲ့သို့သောထိုကဲ့သို့သောလွင်ပြင်, မြင့်မားသောပေါင်းဝင်္, ခုခံကာကွယ်ဆုတ်ခွာစမ်းသပ်မှု, ဒါမှမဟုတ်လူမှုရေးအပြန်အလှန်စမ်းသပ်မှု, ဒါမှမဟုတ်တစ်ဦးဆန္ဒရှိနှိုးဆွဖို့တက်ကြွစွာတုံ့ပြန်မှုအဖြစ်မှီခို variable ကိုမကြာခဏဝတ္ထုနှင့် / သို့မဟုတ်ဆန္ဒရှိနှိုးဆွဖို့ passive တုံ့ပြန်မှုသောတိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်များ, တစ်ဦးဓာတ်အားသတ္တုစုံစမ်းစစ်ဆေး၏ခုခံကာကွယ်မွှေးအဖြစ်, အလွဲသုံးစားမှုအားလုံးအဓိကမူးယစ်ဆေးထံမှစူးရှဆုတ်ခွာရန်စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်းကဲ့သို့သောတုံ့ပြန်မှုပြသခဲ့ကြသည်။ ကိုကင်း, အရက်, နီကိုတင်း, cannabinoids ၏ထပ်ခါတလဲလဲအုပ်ချုပ်မှုကနေဆုတ်ခွာနှင့် benzodiazepines (အမွငျ့မားသောပေါင်းဝင်္, ခုခံကာကွယ်ရုပ်သိမ်းရေး, ဒါမှမဟုတ်ခုခံကာကွယ်မွှေးစမ်းသပ်မှုတစ်ခု anxiogenic ကဲ့သို့တုံ့ပြန်မှုကိုထုတ်လုပ်, ဤသက်ရောက်မှု CRF ရန်၏အုပ်ချုပ်ရေးအားဖြင့်ပြောင်းပြန်နေကြတယ်Sarnyai et al ။ , 1995; Basso et al ။ , 1999; Knapp et al ။ , 2004; Overstreet et al ။ , 2004; Tucci et al ။ , 2003; ဂျော့ခ်ျ et al ။ , 2007; Rodriguez က de Fonseca et al ။ , 1997; Skelton et al ။ , 2007).
ထိုမှတပါး, မူးယစ်ဆေးရုပ်သိမ်းရေးနှင့်အတူဆက်စပ်လျော့နည်းသွားဦးနှောက်ဆုလာဘ် function ကို CRF ဖြစ်ပါသည်1 အဲဒီ receptor-မှီခို။ နီကိုတင်းဆုတ်ခွာစဉ်အတွင်းဆုလာဘ်တံခါး၏မြင့် CRF ပိတ်ဆို့နေသည်1 ရန် (Bruijnzeel et al ။ , 2007, 2009) ။ ထိုအရပ်ကိုခြင်းကိုမနှစ်သက်မော်ဒယ်တစ်ဦး CRF အသုံးပြုခြင်း1 ရန်လည်း opioid-မှီခိုကြွက်များတွင်မိုးရွာသွန်းမှု opioid ဆုတ်ခွာခြင်းဖြင့်သွေးဆောင် conditional ရာအရပျခြင်းကိုမနှစ်သက် (ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်ပိတ်ဆို့Stinus et al ။ , 2005) ။ noradrenergic ၏ microinjections နှင့် CRF ရန်နှင့်အတူလေ့လာရေးအတွက် stria terminalis (၏အိပ်ရာနျူကလိယ၏အခန်းကဏ္ဍများအတွက်သက်သေအထောက်အထားပေးDelfs et al ။ , 2000) နှင့် amygdala ၏ဗဟိုနျူကလိယ (Heinrich et al ။ , 1995), အသီးသီးမိုးရွာသွန်းမှု opioid ဆုတ်ခွာထုတ်လုပ်ရာအရပ်ဆန္ဒရှိပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဓာတ်ခွဲခန်းနှင့်အခြားသူများသူတို့ထံမှသိသိသာသာအထောက်အထားမှီခိုအတွက်အီသနောဒစိတ်ခွန်အားနိုးဆိုးကျိုးများအတွက် CRF များအတွက် key ကိုအခန်းကဏ္ဍသရုပ်ပြပါပြီ။ အီသနောဆုတ်ခွာစဉ်အတွင်း extrahypothalamic CRF စနစ်များကိုမှီခိုကြွက် (ထဲတွင် stria terminalis ၏ amygdala နှင့်အိပ်ရာနျူကလိယ၏ဗဟိုနျူကလိယအတွင်း extracellular CRF တစ်ခုတိုးလာသဖြင့်, hyperactive ဖြစ်လာfunk et al ။ , 2006; Merlo-Pich et al ။ , 1995; သံလွင် et al ။ , 2002) ။ ဦးနှောက် CRF စနစ်များ၏ dysregulation အီသနောရုပ်သိမ်းရေးနှင့်အတူဆက်စပ်တိုးမြှင့်စိုးရိမ်စိတ်ကဲ့သို့သောအပြုအမူများနှင့်မြှင့်တင်ရန်အီသနော Self-အုပ်ချုပ်ရေးနှစ်ဦးစလုံးအခြေခံမှတွေးဆသည်။ ထိုကဲ့သို့သောα-helical CRF အတိုင်းဤအယူအဆ supporting, မျိုးကွဲ-nonselective CRF အဲဒီ receptor ရန်,9-41 နဲ့ D-ဖီ CRF12-41 (intracerebroventricularly ထိုးသွင်း) (အီသနောဆုတ်ခွာ-သွေးဆောင်စိုးရိမ်စိတ်ကဲ့သို့သောအပြုအမူကိုလျော့ချBaldwin et al ။ , 1991; ) အထက်ကြည့်ပါ။
နာတာရှည်အီသနောငွေ့၏ထပ်ခါတလဲလဲသံသရာမှထိတွေ့မှုနှစ်ခုလုံးကိုစူးရှသောရုပ်သိမ်းရေးနှင့်ပေါ်ထွက်လာသောကြောင့်ရှည်ကြာ abstinence (2 ရက်သတ္တပတ်သို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုလွန်စူးရှရုပ်သိမ်းရေး) (စဉ်အတွင်း, ကြွက်များတွင်အီသနောစားသုံးမှုအတွက်သိသိသာသာတိုးထုတ်လုပ်O'Dell et al ။ , 2004; Rimondini et al ။ , 2002) ။ တစ်ဦး CRF ၏ Intracerebroventricular အုပ်ချုပ်ရေး1/ CRF2 ရန် (စူးရှဆုတ်ခွာစဉ်ကအီသနော Self-အုပ်ချုပ်ရေးအတွက်မှီခို-သွေးဆောင်တိုးပိတ်ဆို့Valdez et al ။ , 2004) ။ CRF ရန် (nondependent တိရိစ္ဆာန်များအတွက်အီသနော Self-အုပ်ချုပ်ရေးအပေါ်အဘယ်သူမျှမသက်ရောက်ခဲ့Valdez et al ။ , 2004) ။ တိုက်ရိုက် amygdala ၏ဗဟိုနျူကလိယသို့အုပ်ချုပ်ခွင့်အခါ, CRF ရန်လည်းအီသနောဆုတ်ခွာထုတ်လုပ်စိုးရိမ်စိတ်ကဲ့သို့သောအပြုအမူ attenuated (Rassnick et al ။ , 1993) နှင့်မှီခိုကြွက်များတွင်အီသနော Self-အုပ်ချုပ်ရေး (funk et al ။ , 2006, 2007) ။ တဖန် CRF ရန်အဘယ်သူမျှမသက်ရောက် nondependent တိရိစ္ဆာန်များအတွက်အီသနော Self-အုပ်ချုပ်ရေးအပေါ်လေ့လာတွေ့ရှိခဲ့ကြသည်။ CRF1 သေးငယ်တဲ့-မော်လီကျူးရန်ရွေးချယ်ကင်း၏သွေးကြောသွင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေး (ထပ်တိုးခွင့်နှင့်ဆက်နွယ်မူးယစ်ဆေးဝါးများ၏တိုးမြှင့် Self-အုပ်ချုပ်မှုလျှော့ချSpecio et al ။ , 2008), နီကိုတင်း (ဂျော့ခ်ျ et al ။ , 2007) နှင့်ဘိန်းဖြူ (Greenwell et al ။ , 2009) ။ ဤရွေ့ကား data တွေကိုမှီခိုနှင့်အတူဆက်စပ်တိုးမြှင့် Self-အုပ်ချုပ်ရေးဖြန်ဖြေအတွက်အဓိက amygdala ၏ဗဟိုနျူကလိယအတွင်း CRF များအတွက်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍ, အကြံပြုအပ်ပါသည်။
intracerebroventricularly သို့မဟုတ်စနစ်တကျထိုးသွင်း CRF ရန်လည်း (အလွန်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီး abstinence စဉ်အတွင်းလေ့လာတွေ့ရှိဖိအားဖို့ potentiated စိုးရိမ်စိတ်ကဲ့သို့တုံ့ပြန်မှုပိတ်ဆို့Breese et al ။ , 2005; Valdez et al ။ , 2003) နှင့်အလွန်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီး abstinence နှင့်အတူဆက်စပ်တိုးမြှင့်အီသနော Self-အုပ်ချုပ်ရေး (Sabino et al, 2006; funk et al ။ , 2007; ရစ်ချတ်ဆန် et al ။ , 2008; Chu et al ။ , 2007; Gilpin et al ။ , 2008; Sommer et al ။ , 2008; Gehlert et al ။ , 2007) ။ ဤရလဒ်သည် CRF စနစ်များတစ်ကျန်နေတဲ့ dysregulation ယင်းနှင့်ဆက်စပ်သည့်ပေါ်ထွက်လာသောကြောင့်ရှည်ကြာ abstinence သို့ဆက်လက်အကြံပြု အဆက်မပြတ် / မျှော်လင့် ဇာတ်စင်။ ဒီအယူအဆ supporting, ethanol- နှင့်ကိုကင်း-ဆုတ်ခွာနှစ်ဦးစလုံးတိရိစ္ဆာန်များ6ရက်သတ္တပတ်မြင့်မားသောအဆင့်ဆင့်အတွက်အထှတျအထိတစ်တိုးတက်သောတိုး Post-ဆုတ်ခွာ (နောကျ amygdala အတွက်လျှော့ CRF ကဲ့သို့ immunoreactivity ပြသZorrilla et al ။ , 2001).
ထို့ကြောင့်ဦးနှောက် CRF စနစ်အားမှီခို၏စိတ်ခွန်အားနိုးရှုထောင့်၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်အတူဆက်နွယ်အနုတ်လက္ခဏာအားဖြည့်ရန်အပြုသဘောအနေဖြင့်ပြောင်းလဲမှုဖြန်ဖြေအတွက်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍတိုးချဲ့ဝင်ရောက်ခွင့်နှင့်အတူတိုးပွားလာမူးယစ်ဆေးစားသုံးမှုတွင်ထင်ဟပ်လျက်ရှိသည် (ကြည့်ရှု Koob နှင့် Le Moal, 2008) ဒီအယူအဆရေးရာမူဘောင်၏နောက်ထပ်ပီပီသည်။ microdialysis, စိုးရိမ်ပူပန်ကဲ့သို့တုံ့ပြန်မှု, နေရာအေးစက် (အေးစက်သောအရပ်ခြင်းကိုမနှစ်သက်) နှင့်သွေးကြောသွင်းမူးယစ်ဆေး Self-အုပ်ချုပ်ရေးမှတိုးချဲ့ဝင်ရောက်ခွင့်ကနေဒေတာကိုပစ္စုပ္ပန်အယူအဆတစ်ခု neuropharmacological မူဘောင်များကိုဆုံကြပါပြီ။
လေ့လာမှုတစ်ခုကန့်သတ်အရေအတွက်ကစွဲလမ်းအတွက် CRF receptors ၏လွတ်လပ်သော urocortin စနစ်များ၏အခန်းကဏ္ဍကိုစူးစမ်းခဲ့ကြသည်။ လေ့လာမှုတစ်ခုနံပါတ် (urocortin စနစ်များကိုအီသနော Self-အုပ်ချုပ်ရေးအတွက်အခန်းကဏ္ဍစေခြင်းငှါအကြံပြုRyabinin နှင့် Weitemier, 2006) ။ အီသနောသောက်မောက်စ်နဲ့ကြွက်ဗီဇအလွန်အကျွံ (အလွန်အကျွံမသောက်ကြဘူးကြောင်းမျိုးကွဲနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါပု Edinger-Westphal နျူကလိယအတွက် urocortin-ဖော်ပြဆဲလ်၏မြင့်မားသောပမာဏသာရှိBachtell et al ။ , 2002, 2003; Turek et al ။ , 2005) ။ အဆိုပါ Edinger-Westphal နျူကလိယအတွက် urocortin ဆဲလ်တွေအတွက်လှုပ်ရှားမှုသွေးဆောင်အမြင့်အရက်စားသုံးမှု (Ryabinin et al ။ , 2003) ။ အဆိုပါ Edinger-Westphal နျူကလိယထဲတွင် urocortin ဆဲလ်၏စီမံကိန်းဧရိယာသို့ Ucn 1 microinjection (ကြွက်များတွင်ကန့်သတ်-access ကိုသောက်ရေအတွက်တိုး attenuatedRyabinin et al ။ , 2008) ။ Lipopolysaccharide စိတ်ဖိစီးမှုကိုလည်း (ထို Edinger-Westphal နျူကလိယအတွက် urocortin ဆဲလ်များ၏လှုပ်ရှားမှုတိုးလာKozicz, 2003) ။ နောက်ဆက်တွဲလေ့လာမှုများ (ယခုအလွဲသုံးစားမှုနှင့်ဖိအားများအများအပြားမူးယစ်ဆေးဒီဒေသအတွက် Ucn 1 system ကိုသက်ဝင်စေနိုင်သည်ကိုအကြံပြုသည် pIIIu ချေါ, psychostimulants ၏အခြားဖိအားနှင့်စူးရှသောအုပ်ချုပ်ရေးအတွက် Edinger-Westphal နျူကလိယဒေသတွင် urocortin ဆဲလ်တွေကိုသက်ဝင်ကြောင်းပြသကြSpangler et al ။ , 2009) ။ သို့သော်အီသနော၏ထပ်ခါတလဲလဲအုပ်ချုပ်ရေးနှင့်အတူကြွက်တွေမှာလေ့လာတွေ့ရှိသည့် locomotor ာင်း CRF ပိတ်ဆို့ခဲ့သည်1 Ucn 1 သို့မဟုတ် CRF အတွက်ရန်နှင့်မ2 နောက်ကောက်ကြွက် (သင်းအုပ်ဆရာ et al ။ , 2008) ။ CRF2 နောက်ကောက်ကြွက်လည်း 24 ဇ Two-ပုလင်းရွေးချယ်မှုနှင့်ကန့်သတ်-access ကို Paradigm (နှစ်ဦးစလုံးအတွက်အီသနောစားသုံးမှုအတွက်လျှောက်လျော့နည်းပြသရန်ပျက်ကွက်ရှပ် et al ။ , 2005) ။ စုစုပေါင်းဤရလဒ်များ Edinger-Westphal နျူကလိယ၏ဒေသအတွက် pIIIu ထံမှ deriving အဆိုပါ Ucn 1 system ကိုအလွန်အကျွံအီသနောစားသုံးမှုအားဖြင့် activated ကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။ သို့သော်၎င်း၏အရေးယူ CRF အားဖြင့်ပိုပြီးကမကထပြုခဲ့စေခြင်းငှါ1 CRF ထက် receptors2 receptors ။
အီသနောမှီခိုတစ်အလွန်အမင်းရွေးချယ် CRF နှင့်ဆက်စပ်တိုးမြှင့်အီသနောစားသုံးမှု၏ဒိုမိန်းအတွက်2 agonist, Ucn 3, အ amygdala ၏ဗဟိုနျူကလိယသို့ intracerebroventricularly သို့မဟုတ်တိုက်ရိုက်ထိုးသွင်းသည့်အခါ, တစ်ဦး CRF ဆင်တူတစ်ခုအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိခဲ့1 မှီခိုကြွက်များတွင်စူးရှရုပ်သိမ်းရေးနှင့်ဆက်စပ်အီသနော Self-အုပ်ချုပ်ရေးအတွက်တိုးလျှော့ချအတွက်ရန်။ သို့သျောလညျးအဘယ်သူမျှမသက်ရောက် (nondependent ကြွက်များတွင်လေ့လာတွေ့ရှိခဲ့သည်Valdez et al ။ , 2004; funk နဲ့ Koob, 2007) ။ Ucn3ကိုလည်းရွေးချယ်အီသနောမှကန့်သတ် access ကိုစဉ်အတွင်း C57BL / 6J ကြွက်များတွင်လေ့လာတွေ့ရှိအီသနောစားသုံးမှုအတွက်တိုး (attenuatedရှပ်နှင့် Phillips က, 2009) ။ ဤရွေ့ကားရလဒ်များ Ucn3စနစ်အခွအေနမြေား၏နံပါတ်အောက်မှာအလွန်အကျွံသောက်သုံးပိတ်ဆို့နှင့် CRF များအတွက်အခန်းကဏ္ဍအကြံပြုစေခြင်းငှါအကြံပြု2 CRF မှတဆင့် CRF နှင့် Ucn 1 ၏အခန်းကဏ္ဍကိုမှဆန့်ကျင်ဘက်ကြောင်း receptors1 မှီခိုတိရိစ္ဆာန်များအတွက်အီသနောစားသုံးမှုပြောင်းလဲပစ်အတွက် receptors ။
နာတာရှည် High-ထိုးကင်းထိတွေ့မှုနှင့်ဆက်စပ် hippocampal ချပ်ထဲမှာဆုတ်ခွာ-သွေးဆောင်တိုးမြှင့်ရေရှည်အလားအလာနှစ်ဦးစလုံး CRF ပိတ်ဆို့ခဲ့သည်1 နှင့် CRF2 အဲဒီ receptor ရန် (ဂွမ် et al ။ , 2009) ။ နာတာရှည်ကင်းထံမှစူးရှဆုတ်ခွာပြီးနောက်နှစ်ဦးနှစ်ဖက် septum ကနေဦးနှောက်ကိုအချပ်အသံသွင်း, CRF အတွက်ပြောင်းကုန်ပြီအတွက်2 ပံ့ပိုးဖို့တားစီးကနေအဲဒီ receptor လှုပ်ရှားမှု (လေ့လာတွေ့ရှိခဲ့သည်လျူ et al ။ , 2005) ။ နာတာရှည် opioid အုပ်ချုပ်မှုကနေသဘောဆောင်သော somatic ဆုတ်ခွာ CRF အတွက်ပိတ်ဆို့ခဲ့သည်2 နောက်ကောက်ကြွက် (Papaleo et al ။ , 2008), Conditions ရာအရပျခြင်းကိုမနှစ်သက်ဖြင့်တိုင်းတာ opioid ဆုတ်ခွာများ၏စိတ်ခွန်အားနိုးသက်ရောက်မှု, CRF ပိတ်ဆို့ထားခဲ့ကြသည်သော်လည်း1 နောက်ကောက်ကြွက် (Contarino နှင့် Papaleo, 2005) ။ စုစုပေါင်းဤရလဒ်များ CRF, အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများကနေဆုတ်ခွာစဉ်အတွင်းကြောင်းအကြံပြု2 စနစ်က somatic ရုပ်သိမ်းရေး, စိတ်ခွန်အားနိုးရုပ်သိမ်းရေးနှင့်သင်ယူမှုအတွက်အပြောင်းအလဲများရှုထောင့်သဘောဆောငျသော neuroplasticity အတွက်ဆောင်ရွက်နေဖြစ်လာပေမည်။ (ဥပမာ, septum, amygdala, hippocampus) ပါဝင်ပတ်သက်သည်ဟုအဆိုပါတိကျတဲ့က်ဘ်ဆိုက်များသို့သျော, ဆုံးဖြတ်သည်ခံရဖို့ရှိနေဆဲဖြစ်ပါသည်။
စိတ်ဖိစီးမှုနှင့်ဖိအားထိတွေ့မှု၏တစ်ဦးကပြည်နယ်ရှည်လျား (ပြန်သွားကြသည်မှ relapse နှင့်အားနည်းချက်နဲ့ဆက်စပ်ပြီKoob နှင့် Kreek, 2007; Marlatt နဲ့ Gordon, 1980) ။ လူ့အရက်သမားမှာတော့ထိုကဲ့သို့သော dysphoria, အကျပ်အတည်းများကြောင့်သာဖြစ်လေသည်, ယားယံခြင်း, နှင့်စိုးရိမ်ပူပန်မှုအဖြစ်အပျက်သဘောဆောင်သောစိတ်ခံစားမှုပြည်နယ်များအားဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာနိုင်မြောက်မြားစွာလက္ခဏာတွေ, (ရှည်လျားသောအရက်ထဲကနေစူးရှသောရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆုတ်ခွာပြီးနောက်ဆက်လက်ရှိAlling et al ။ , 1982) ။ ဤရွေ့ကားလက္ခဏာတွေ, post ကိုစူးရှသောဆုတ်ခွာမကြာခဏ (relapse အရင်အဦးနေရာHershon, 1977; Annie et al ။ , 1998) ။ အမျက်ဒေါသ, စိတ်ပျက်, ဝမ်းနည်းမှု, စိုးရိမ်ပူပန်၏ဒြပ်စင်များနှင့်ဒုစရိုက်ဖြေအပါအဝင်အပျက်သဘောဆောင်သောစိတ်ခံစားမှု, (relapse အတွက်သော့ချက်အချက်ဖြစ်ပါသည်Zywiak et al ။ , 1996) နှင့် Marlatt ရဲ့ taxonomy တစ်အကြီးစားပွား (ထဲမှာ relapse ၏ဦးဆောင်မိုးရွာသွန်းမှုခဲ့သည်Lowman et al ။ , 1996) ။ အနုတ်လက္ခဏာစိတ်ဖိစီးမှု, ဒါမှမဟုတ်ရုပ်သိမ်း-related ဒုက္ခဆင်းရဲလည်း (မူးယစ်ဆေးတဏှာတိုးပွါး, အကျိုးသက်ရောက်စေChildress et al ။ , 1994; Cooney et al ။ , 1997; Sinha et al ။ , 2000).
မူးယစ်ဆေး-ရှာ၏စိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင် reinstatement အတွက် CRF ၏အခန်းကဏ္ဍကိုမူးယစ်ဆေးစားသုံးမှုအတွက်စူးရှရုပ်သိမ်းရေးနှင့်မှီခို-သွေးဆောင်တိုး၏စိုးရိမ်ပူပန်မှုကဲ့သို့သောဆိုးကျိုးများအတွက် CRF ၏အခန်းကဏ္ဍကိုမှအတန်ငယ်အပြိုင်ရလဒ်များကိုတစ်ပုံစံအောက်ပါအတိုင်း (ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းအဘို့အတွေ့ Shaham et al ။ , 2003; lu et al ။ , 2003) ။ ရောနှောထားသော CRF1/ CRF2 ရန် intracerebroventricularly ထိုးသွင်းခြင်းနှင့် / သို့မဟုတ် CRF1 (ကြည့်ရှုကိုကင်း, opioid, အရက်, နှင့်အပြုအမူရှာကြံနီကိုတင်း၏စိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင် reinstatement ပိတ်ဆို့သေးငယ်တဲ့-မော်လီကျူးရန် လျူနှင့် Weiss, 2002; Shaham et al ။ , 2003; lu et al ။ , 2003; le et al ။ 2000; Shaham et al ။ 1998; Gehlert et al ။ , 2007; Bruijnzeel et al ။ , 2009; Marinelli et al ။ , 2007) ။ ဤရွေ့ကားသက်ရောက်မှုတစ်ဦးရောနှော CRF ၏ intracerebral ထိုးနှင့်အတူပုံတူကူးယူခဲ့ကြ1/ CRF2 ရန်သို့မဟုတ်သေးငယ်တဲ့-မော်လီကျူး CRF1 အဆိုပါ stria terminalis, ပျမ်းမျှ raphe နျူကလိယနှင့် ventral tegmental ဧရိယာ၏အိပ်ရာနျူကလိယသို့ရန်, ဒါပေမယ့်မ amygdala သို့မဟုတ်နျူကလိယ accumbens (ကြည့်ရှု Shaham et al ။ , 2003; lu et al ။ , 2003), ထိုကဲ့သို့သော stria terminalis, ပျမ်းမျှ raphe နျူကလိယနှင့် ventral tegmental ဧရိယာ၏အိပ်ရာနျူကလိယအဖြစ်ကွဲပြားခြားနားသောဆိုဒ်များ, မူးယစ်ဆေးမိမိကိုယ်ကိုအတွက်မှီခို-သွေးဆောင်တိုးအတွက် CRF ၏အခန်းကဏ္ဍကိုမတူဘဲအတွက်စိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင် relapse များအတွက်အရေးကြီးသောဖြစ်မည်အကြောင်းအကြံပြုခြင်း နေ့စွဲဖို့ amygdala ၏ဗဟိုနျူကလိယ (ရန်အဓိကအားဒေသသုံးအဖြစ်ပြန်ဆိုထားပြီးဖြစ်သော -administrationfunk et al ။ , 2006) ။ စိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင် reinstatement အဆိုပါ HPA ဝင်ရိုး (၏စိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင် activation ၏လွတ်လပ်သောဖြစ်ပေါ်ကြောင်းသတိထားမိErb et al ။ , 1998; le et al ။ , 2000; Shaham et al ။ , 1997).
ဥပမာအားဖြင့်, CRF စနစ်များလည်း ventral tegmental ဧရိယာထဲမှာဖော်ထုတ်ခဲ့ကြနှင့် footshock စိတ်ဖိစီးမှု (ထို ventral tegmental ဧရိယာသို့ CRF လွှတ်ပေးရန်နှင့်စိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင် reinstatement အတွက်အခန်းကဏ္ဍရှိပါတယ်နိုင်ပါတယ်ဝမ် et al ။ , 2005) ။ ကိုကင်း-ရှာကြံ၏ Footshock-သွေးဆောင် reinstatement တစ် CRF ၏အုပ်ချုပ်ရေးအားဖြင့်ပိတ်ဆို့ထားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်2 အဆိုပါ CRF binding ပရိုတိန်းအဘို့ခိုင်ခံ့ဆှဖှေဲ့နှင့်အတူအဲဒီ receptor ရန်နှင့် CRF agonists နှစ်ဦးစလုံး CRF များ၏ပါဝင်ပတ်သက်မှုအကြံပြုခြင်း, footshock အားဖြင့်သွေးဆောင်သက်ရောက်မှု mimicked2 စိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင် reinstatement အတွက် ventral tegmental ဧရိယာ (အတွင်း receptors နှင့် CRF binding ပရိုတိန်းဝမ် et al ။ , 2007) ။ ဤရွေ့ကားရလဒ်များ CRF ၏အခန်းကဏ္ဍကိုဖြည့်1 စိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင် reinstatement အတွက်တိုးချဲ့ amygdala အတွက်စနစ် (Shaham et al ။ , 1998) ။ ဖြစ်နိုင်သည်ဦးနှောက် CRF စနစ်များကိုချိတ်ဆက်စိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင် reinstatement အတွက်ပတ်သက်သည်ဟုယူဆရသည်အခြားဦးနှောက်စိတ်ဖိစီးမှုစနစ်များ norepinephrine, orexin, vasopressin နှင့် nociceptin (တွေ့မြင်ပါဝင်သည် Shaham et al ။ , 2003; lu et al ။ , 2003).
ထို့ကြောင့်ဦးနှောက်စိတ်ဖိစီးမှုစနစ်များကိုနှစ်ဦးစလုံးထိခိုက်စေခြင်းငှါ ဆုတ်ခွာ / အနုတ်လက္ခဏာကိုထိခိုက် ဇာတ်စင်နှင့် အဆက်မပြတ် / မျှော်လင့် အဆိုပါ amygdala ၏တိုးချဲ့ amygdala စိတ်ခံစားမှုစနစ် (ဗဟိုနျူကလိယ၏ကွဲပြားခြားနားသောအစိတ်အပိုင်းများကိုထိတွေ့ဆက်ဆံနေဖြင့်ဆိုသော်ငြားထိုစွဲသံသရာ၏စင်မြင့်, vs. အဆိုပါ stria terminalis ၏အိပ်ရာနျူကလိယ; အထက်ကြည့်ပါ), နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးမှီခို၏အနုတ်လက္ခဏာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြည်နယ်ပါဝင်သော dysregulations အဆိုပါ drug- ၏ activation မောင်းနှင် "တဏှာ" cue- နှင့်စိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင် reinstatement neurocircuits မှအားနည်းချက်များအတွက်သေံတင်ထားရန်အလွန်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီး abstinence ကာလအတွင်းဆက်လက်တည်ရှိနေခဲ့သည်။
CRF သည်အမှောင်ဘေးထွက်နှင့်စွဲမှု: စိတ်ဖိစီးမှုစနစ်များနှင့်စွဲချိတ်ဆက်ခြင်းတို့အတွက်တစ်ဦးက Conceptual Framework ကို
အလွဲသုံးစားမှုအားလုံးသည်မူးယစ်ဆေးဝါး hypothalamus ၏ paraventricular နျူကလိယအတွက် CRF ၏ activation မှတဆင့်မူးယစ်ဆေးဝါးထံမှစူးရှဆုတ်ခွာစဉ်အတွင်းနောက်တဖန်မူးယစ်ဆေး-ဆည်းပူးနေ၏ဝယ်ယူစဉ်အတွင်း HPA ဝင်ရိုးထိတွေ့ဆက်ဆံပါ။ မူးယစ်ဆေးဆည်းပူးနေနှင့်ဆုတ်ခွာ၏သံသရာဆက်လက်သကဲ့သို့, HPA ဝင်ရိုးတုံ့ပြန်မှု (ကျိုးသကဲ့သို့ဖြစ်ကြပါစေဖြစ်ပေမယ့် glucorticoids ၏မြင့်မားဖို့ဦးနှောက်၏ထပ်ခါတလဲလဲထိတွေ့သည့် extrahypothalamic ဦးနှောက်စိတ်ဖိစီးမှုစနစ်များအပေါ်လေးနက်သက်ရောက်မှုရှိသည်ဖို့ဆက်လက်နိုင်ပါတယ်ပုံ 3) ။ ခိုင်မာတဲ့သက်သေအထောက်အထား (glucocorticoids အဆိုပါ amygdala အတွက် CRF သည့်စနစ် "sensitize" အဲဒီအကြံပြုImaki et al ။ , 1991; Makino et al ။ , 1994; Swanson နှင့် Simmons, 1989) ။ ထို့ကြောင့်မှောင်မိုက်ဘက်မှ CRF များ၏အလှူငွေ၏ပထမအစိတ်အပိုင်းအသစ်အဆန်းများနှင့်ဆုလာဘ်၏ပံ့ပိုးဖို့မြင့်မားသော Response မှကနဦးနှင့်ဆက်နွယ်သော HPA ဝင်ရိုးနှင့် glucocorticoids ၏ activation ဖြစ်ပါသည်။ နောက်ပိုင်းတွင်အဆိုပါတိုးချဲ့ amygdala အတွက် CRF စနစ်များာင်းသူတို့မူးယစ်ဆေးစွဲနှင့်ဆက်စပ် pathophysiology မှ homeostasis ထံမှပြောင်းကုန်ပြီတဲ့စိတ်ဖိစီးမှုအစိတ်အပိုင်းအထောက်အကူပြုရာကိုတွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ အစိတ်အပိုင်းဆုလာဘ်စနစ်များအလွန်အကျွံ activation ဖို့ပြိုင်ဘက်ဖြစ်စဉ်ကိုတုန့်ပြန်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုထင်ဟပ်စေခြင်းငှါဤသည်စိတ်ဖိစီးမှု, (Anti-ဆုလာဘ်ချေါKoob နှင့် Le Moal, 2008).
ဦးနှောက်ဆားကစ်စွဲအနုတ်လက္ခဏာအားဖြည့်ရန်အပြုသဘောအားကောင်းရာမှအားလှုံ့ဆျောအဖြစ်စွဲသံသရာ၏ကွဲပြားခြားနားသောအဆင့်မှာစုဆောင်းခံရဖို့တွေးဆ။ ညာဘက်ထိပ် circuit ကိုပု hypothalamic-pituitary-adrenal (HPA) ဝင်ရိုးရာ (ရည်ညွှန်းi) feeds တွေကို ...
ပြိုင်ဘက်ဖြစ်စဉ်ကိုကြား-system ကို neuroadaptations (အကျိုးကိုစနစ်၏နာတာရှည် activation နေဖြင့်စုဆောင်းသို့မဟုတ် dysregulated ဖြစ်ကြောင်းအလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများ၏အပြုသဘောဆောင်အကျိုးသက်ရောက်မှုများတွင်ပါဝင်ပတ်သက်သူတွေကိုထက်အခြား neurochemical စနစ်များပါဝင်မှတွေးဆကြသည်Koob နှင့် Bloom, 1988) ။ တစ်ဦးကကြားက-system ကို neuroadaptation နောက်တဖန်ဆုလာဘ် function ကိုကန့်သတ်, အခြားမတူညီတဲ့ဆားကစ် (Anti-ဆုလာဘ် circuit ကို) အရာတစ်ခု circuitry အပြောင်းအလဲအကျိုးကိုဆားကစ်များက activated ဖြစ်ပါတယ်နှင့်လုပ်ရပ်များဆန့်ကျင်ခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်, အလွဲသုံးစားမှုအားလုံးမူးယစ်ဆေးများအတွက်မှီခို၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုစဉ်အတွင်း CRF စနစ်၏စုဆောင်းမှု key ကိုစိတ်ခွန်အားနိုးအရေးပါမှုရှိလိမ့်မယ်။ တစ်ဦးအကြား-system ကိုပြိုင်ဘက်လုပ်ငန်းစဉ်၏စိတ်ခွန်အားနိုးရုပ်သိမ်းရေးနှင့်ဆက်စပ်အပိုဆောင်းအကြား-system ကို neuroadaptations အဆိုပါ dynorphin / κ-opioid စနစ်, norepinephrine ဦးနှောက်စိတ်ဖိစီးမှုစနစ်, extrahypothalamic vasopressin စနစ်, နှင့်ဖြစ်နိုင်သည် orexin စနစ်၏ activation ပါဝင်သည်။ ထိုကဲ့သို့သော neuropeptide Y နှင့် nociceptin အဖြစ်ဦးနှောက် Anti-စိတ်ဖိစီးမှုစနစ်များ, ထို့အပြင် (အရှင် homeostasis restore ပြန်များအတွက်ယန္တရားဖယ်ရှားခြင်း, မှီခို၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုနေစဉ်အတွင်းလျော့မည်အကြောင်း,Koob နှင့် Le Moal, 2008) ။ ထို့အပြင်ဦးနှောက်စိတ်ဖိစီးမှုစနစ်များကို Activation စူးရှ abstinence နှင့်အတူဆက်စပ်အနုတ်လက္ခဏာစိတ်ခွန်အားနိုးပြည်နယ်မှအထောက်အကူဖြစ်နိုင်သည်မသာ, ဒါပေမယ့်လည်းအကျပ်အတည်းများကြောင့်သာဖြစ်လေသည်, မြဲ dysphoria နှင့်လူသားတွေအတွက်အလွန်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီး abstinence စဉ်အတွင်းလေ့လာတွေ့ရှိဖိအားအားနည်းချက်မှအထောက်အကူဖြစ်စေလိမ့်မည်။ ဤရလဒ်သည်မှီခိုနေစဉ်အတွင်းမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုများဆက်လက်ရန်လှုံ့ဆော်မှုထိုကဲ့သို့သော dopamine, opioid peptides, serotonin, နှင့်γ-အဖြစ်မှီခို၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုနေစဉ်အတွင်းအလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဆိုးကျိုးများအားဖြည့်သည့်လူတန်းစားနှင့်ဆက်စပ် neurotransmitters ရဲ့လုပ်ဆောင်ချက်အတွက်အပြောင်းအလဲတစ်ခု, ပါဝင်သည်သာမကကြောင်းအကြံပြု aminobutyric အက်ဆစ်, ဒါပေမယ့်လည်းဦးနှောက်ကဖိစီးမှုစနစ်များစုဆောင်းမှုနှင့် / သို့မဟုတ်ဦးနှောက်ကိုဆန့်ကျင်စိတ်ဖိစီးမှုစနစ်များ (၏နှောင့်အယှက်Koob, 2008; Koob နှင့် Le Moal, 2008).
ထို့ကြောင့်စူးရှသောဖိအားသင့်လျော်သောတုံ့ပြန်မှုအတွက်သာမန်အားဖြင့်ပါဝင်ပတ်သက် CRF နှငျ့ပတျသကျသောအာရုံကြောဆားကစ်၏လုပ်ဆောင်မှုကိုစွဲလမ်း၏အနုတ်လက္ခဏာအားဖြည့်မောင်းသောဆန္ဒရှိစိတ်ခံစားမှုပြည်နယ်စေတယ်။ အဆိုပါ ဆုတ်ခွာ / အနုတ်လက္ခဏာကိုထိခိုက် အထက်သတ်မှတ်ဇာတ်စင် (ထိုကဲ့သို့သောနာတာရှည်ယားယံခြင်း, စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနာကျင်မှု, အကျပ်အတည်းများကြောင့်သာဖြစ်လေသည်, dysphoria, alexithymia, နှင့်သဘာဆုလာဘ်များအတွက်လှုံ့ဆျောမှု၏အရှုံးအဖြစ် key ကိုစိတ်ခွန်အားနိုးဒြပ်စင်ပါဝင်ပါသည်နှင့်အလွဲသုံးစားမှုအားလုံးအဓိကမူးယစ်ဆေးဝါးများကနေဆုတ်ခွာစဉ်အတွင်းဆုလာဘ်တံခါးခုံအတွင်းတိုးခြင်းဖြင့်တိရိစ္ဆာန်များအတွက်သွင်ပြင်လက္ခဏာဖြစ်ပါသည်Koob, 2008) ။ စွဲလမ်း၏အမှောင်ဘက်ခြမ်း၏အဓိကအစိတ်အပိုင်း Anti-ဆုလာဘ် (ဆုလာဘ်ကန့်သတ်နိုင်ဖို့ရာအရပျ၌ထားဆိုလိုသည်မှာဖြစ်စဉ်များ) ၏အယူအဆ (ဖြစ်ပါတယ်Koob နှင့် Le Moal, 1997,Koob နှင့် Le Moal, 2005,Koob နှင့် Le Moal, 2008) ။ မှီခိုနှင့်ဆုတ်ခွာဖွံ့ဖြိုးအဖြစ်, ထိုကဲ့သို့သော CRF အဖြစ်ဦးနှောက် Anti-ဆုလာဘ်စနစ်များ (စိတ်ဖိစီးမှု-လိုပဲဆန္ဒရှိပြည်နယ်များထုတ်လုပ်ရန်စုဆောင်းခံရဖို့တွေးဆကြသည်Koob နှင့် Le Moal, 2001; Nestler, 2005; Aston-ဂျုံးစ် et al ။ , 1999).
ဤသုံးသပ်ချက်ကိုတစ်လျှောက်လုံးတစ်ဦးခြုံငုံအယူအဆရေးရာမူဘောင် CRF ကကမကထပြုခဲ့တဲ့ key ကိုဦးနှောက်ကဖိစီးမှုစနစ်၏ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုစွဲများ၏အခြေအနေတွင် homeostasis နဲ့ရိုးရှင်းတဲ့ချိုး, ဒါပေမယ့်မဟုတ်ဘဲ allostasis ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုထက်ပိုမိုကိုယ်စားပြုသောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ feed ကို-ရှေ့ဆက်ထက်အပျက်သဘောတုံ့ပြန်ချက်, ယန္တရားများစေ့စပ်ခံရဖို့တွေးဆကြောင့် Allostasis ( "ပြောင်းလဲမှုကတဆင့်တည်ငြိမ်ရေး" အဖြစ်သတ်မှတ်နှင့် homeostasis ထံမှကွဲပြားခြားနားသောဖြစ်ပါသည်Sterling နှင့် Eyer, 1988) ။ အဆိုပါစနစ်များကို homeostasis ပြန်လည်ဖြစ်ထွန်းရန်လုံလောက်သောအချိန်မရှိဘူးလျှင်သို့သော်လျင်မြန်စွာအရင်းအမြစ်များကိုစည်းရုံးဖို့နဲ့ feed ကို-ရှေ့ဆက်ယန္တရားများသုံးစွဲဖို့တိကျစွာဒီစွမ်းရည်ကိုတစ်ဦး allostatic ပြည်နယ်စေပါတယ်။ တစ်ဦး allostatic ပြည်နယ် ယင်း၏သာမန် (homeostatic) လည်ပတ်မှုအဆင့်ကနေစည်းမျဉ်းစနစ်၏နာတာရှည်သှဖေတစ်ပြည်နယ်အဖြစ်သတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။
ဦးနှောက်ကဖိစီးမှုစနစ်များ (homeostasis ဖို့မျှော်လင့်စိန်ခေါ်မှုများမှလျှင်မြန်စွာကိုတုံ့ပြန်ပေမယ် habituate နှေးနေကြသည်သို့မဟုတ်အလွယ်တကူတစ်ကြိမ်စေ့စပ်ပိတ်ထားကြဘူးKoob, 1999) ။ လုံလောက်သောအချိန်သို့မဟုတ်အရင်းအမြစ်များကိုတုန့်ပြန်ပိတ်ထားဖို့ကိုမရရှိနိုင်လျှင်ထို့ကြောင့်ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာစိန်ခေါ်မှုတစ်ခုလျင်မြန်စွာနှင့်စဉ်ဆက်မပြတ်တုံ့ပြန်မှုခွင့်ပြုသောအလွန်ဇီဝကမ္မယန္တရားရောဂါဗေဒ၏အင်ဂျင်ဖြစ်လာသည်။ ထိုကဲ့သို့သောမြင့်မားတဲ့သွေးဖိအားကဲ့သို့သောအခြားနာတာရှည်ဇီဝကမ္မမမှန်ဆင်တူမူးယစ်ဆေးစွဲ, အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှပိုဆိုးလာရင်, သိသာပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသြဇာလွှမ်းမိုးမှု (ဥပမာပြင်ပဖိအား) ကိုဘာသာရပ်ဖြစ်တယ်, ပင်လအတွင်းလျင်မြန်စွာ "re-စွဲ" ခွင့်ပြုမယ့်ကျန်နေတဲ့အာရုံကြောသဲလွန်စအရွက်များနှင့်အနှစ် detoxification နှင့်နေကြပြီး။ မူးယစ်ဆေးစွဲဤလက္ခဏာများစိတ်ခံစားမှု function ကို၏ရိုးရှင်းစွာ homeostatic dysregulation ထက်ပိုအဖြစ်မဟုတ်ဘဲအဓိကပံ့ပိုးအဖြစ် CRF activation နဲ့ allostatic ပြည်နယ်အဖြစ်မူးယစ်ဆေးစွဲနေတဲ့ပြန်လည်စဉ်းစားပေးရန်ဦးဆောင်ခဲ့ကြသည်။ compulsive မူးယစ်ဆေးရှာ၏ဤပြည်နယ်လျော့နည်းသွားဆုလာဘ်ဆားကစ်၏ function ကို, prefrontal cortex အလုပ်အမှုဆောင်ထိန်းချုပ်မှုဆုံးရှုံး, striatal လှုံ့ဆော်မှု-တုံ့ပြန်မှုအသင်းအဖွဲ့များ၏ပံ့ပိုးကူညီလျက်, CRF ဦးနှောက်၏စုဆောင်းမှုအပါအဝင်မြောက်မြားစွာ neurobiological အပြောင်းအလဲကမီးလောင်ရာဆုလာဘ် set ကို point ရဲ့နာတာရှည်မြင့်ပေါင်းစပ်ကိုယ်စားပြုတယ် စိတ်ဖိစီးမှုစနစ် (Koob နှင့် Le Moal, 2008) ။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကမျိုးရိုးဗီဇအားနည်းချက်ကိုလည်း compulsive ၏အမှောင်ဘက်ခြမ်းဝင်ရိုးတစ်ကဏ္ဍမှပါစေခြင်းငှါ ပို. ပို. ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်လာနေသည်။
တစ်ခုကအသင်း CRF ၏ haplotype tag ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့်ပြုလုပ်နိုင် Single-ဘေ့ polymorphic အကြားရှာတွေ့ခဲ့သည်1 မြီးကောင်ပေါက်ထဲမှာမူးရူးသောက်စားအတွက်အရက်စားသုံးမှုပုံစံများနှင့်အရက်-မှီခိုလူကြီးများ (နဲ့အတူဗီဇTreutlein et al ။ , 2006) ။ တစ်နောက်ဆက်တွဲလေ့လာမှုမှာ R1876831 Single-ဘေ့ polymorphic ၏ကို C allele များအတွက် homozygous မြီးကောင်ပေါက် (အခါသမယနှုန်းကိုပိုမိုအရက်သောက်နှင့် T-allele တင်ဆောင်လာသောဘာသာရပ်များထက်အနုတ်လက္ခဏာဘဝဖြစ်ရပ်များနှင့် ပတ်သက်. မိုးသည်းထန်စွာအရက်သောက်မြင့်မားတစ်သက်တာနှုန်းထားများခဲ့Blomeyer et al ။ , 2008) ။ တစ်နောက်ဆက်တွဲလေ့လာမှုမှာတော့ rs1876831 ၏ကို C allele ၏ homozygotes အဖြစ် rs242938 ၏တစ်ဦးက allele ၏သယ်ဆောင်, စိတ်ဖိစီးမှုနှင့်ထိတွေ့သောအခါ, (အခြား alleles ၏သယ်ဆောင်ထက်သိသိသာသာမြင့်မားတဲ့သောက်သုံးရေလှုပ်ရှားမှုပြSchmid et al ။ , 2009) ။ ယင်းဗီဇမရွေး Marchigian-Sardinian သာ. နှစ်သက်ကြွက်လိုင်းများတွင်မြင့်မားသောအီသနော preference ကို၏တစ်ဦးမျိုးရိုးဗီဇ polymorphic ဆက်နွယ်နေကြောင်း crhr1 ကမကထနှင့် CRF တစ်ခုတိုးလာ1 အဆိုပါ amygdala အတွက်သိပ်သည်းဆအဖြစ်တစ်ဦး CRF မှစိတ်ဖိစီးမှုများနှင့်တိုးချဲ့ sensitivity ကိုတိုးမြှင် sensitivity ကို1 ရန် (Hansson et al ။ , 2006) ။ အီသနောမူးယစ်နှင့်မှီခိုများ၏ထပ်ခါတလဲလဲသံသရာထိတွေ့ Non-မျိုးရိုးဗီဇကိုရှေးခယျြကြွက်တစ် CRF အတွက်1 ရန်အလွန်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီး abstinence နှင့်အတူဆက်စပ်တိုးမြှင့်အီသနောစားသုံးမှုသည် CRF ၏ upregulation နှင့်အတူတိုက်ဆိုင်တစ်ခုအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုပိတ်ဆို့ထား1 အဆိုပါ CRF ၏မျိုးဗီဇနှင့် downregulation2 အဆိုပါ amygdala အတွက်မျိုးဗီဇ (Sommer et al ။ , 2008) ။ စုစုပေါင်းကဤရလဒ်များလူ့လူဦးရေအတွက်သေချာသော Single-ဘေ့ polymorphic အမှောင်ဘက်ခြမ်းနှင့်ဆက်စပ်အလွန်အကျွံသောက်သုံး syndrome အချို့ Subtype မှအားနည်းချက်ကြိုတင်ခန့်မှန်းစေခြင်းငှါ၎င်းစိတ်လှုပ်ရှားစရာဖြစ်နိုင်ခြေအကြံပြုအပ်ပါသည်။
ဒီလက်ရေးမူများမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်၏ပြင်ဆင်မှုကနျြးမာရေးအမျိုးသား Institutes ဆီးချိုရောဂါနှင့် Digestive နှင့်ကျောက်ကပ်ရောဂါများအပေါ်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အင်စတီကျုကနေ DK26741 ပေးရန်နှင့်အရက်နှင့်စွဲလမ်းမှုသုတေသနများအတွက် Pearson ရေးစင်တာတို့ကထောက်ခံခဲ့သည်။ စာရေးသူကဒီလက်ရေးမူများမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်ပြင်ဆင်နေခြင်းနှင့်တည်းဖြတ်နဲ့သူ့ရဲ့အကူအညီအတွက်မိုက်ကယ် Arends ကျေးဇူးတင်ချင်ပါတယ်။
Alheid gf, အာရုံကြောဆိုင်ရာစိတ်ရောဂါမမှန်များအတွက်အထူးဆီလျော်၏ Basal forebrain အဖှဲ့အစညျးမှာ Heimer အယ်လ်နယူးအမြင်များ: အ striatopallidal, amygdaloid နှင့် substantia innominata ၏ corticopetal အစိတ်အပိုင်းများကို။ neuroscience ။ 1988; 27: 1-39 ။ [PubMed]
Alling ကို C, Balldin J ကို, Bokstrom K ကို Gottfried CG, Karlsson ငါအီသနော၏နာတာရှည်အလွဲသုံးစားမှုပြီးနောက်နှောင်းပိုင်းကပြန်လည်နာလန်ထူကာလကြာချိန်ပေါ် Langstrom G. အလေ့လာရေး: ထဲကဓာတုပစ်စညျးမြားနှငျ့စိတ်ရောဂါညွှန်းကိန်းတစ်ခု Cross-Section လေ့လာမှု။ Acta Psychiatric Scand ။ 1982; 66: 384-397 ။ [PubMed]
HM, Sklar သည် SM တခု AE Annis ။ relapse အကျပ်အတည်းအခြေအနေများနှင့် ပတ်သက်. ကျား, ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းနှင့်ကုသအရက်သမားတို့တွင်အရလဒ်ကို။ စှဲလမျးသူပြုမူနေ။ 1998; 23: 127-131 ။ [PubMed]
Aston-ဂျုံးစ်, G, Delfs JM, Druhan J ကို, Zhu Y. အဆိုပါ stria terminalis ၏အိပ်ရာနျူကလိယ: opiate ရုပ်သိမ်းရေးအတွက် noradrenergic လုပ်ရပ်များများအတွက်ပစ်မှတ် site ကို။ ခုနှစ်တွင်: McGinty JF, အယ်ဒီတာ။ အဆိုပါတိုးချဲ့ Amygdala ဖို့ Ventral Striatum ကနေတိုးတက်: Neuropsychiatry နှင့်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုများအတွက်အကျိုးသက်ရောက်မှု။ vol ။ 877 ။ သိပ္ပံနယူးယောက်အကယ်ဒမီ; နယူးယောက်: 1999 ။ စစ။ 486-498 ။ စီးရီးခေါင်းစဉ်: သိပ္ပံ၏နယူးယောက်အကယ်ဒမီ၏ရာဇဝင်။ [PubMed]
Bachtell RK, Tsivkovskaia NO, Ryabinin AE ။ အဆိုပါ Edinger-Westphal နျူကလိယနှင့်အရက်-သွေးဆောင် hypothermia ရန်၎င်း၏စပ်လျဉ်း urocortin စကားရပ်ထဲမှာ strain ကွဲပြားခြားနားမှု။ neuroscience ။ 2002; 113: 421-434 ။ [PubMed]
Bachtell RK, Weitemier AZ, သွပ်ရည်စိမ်-Rosa တစ်ဦးက, Tsivkovskaia NO, မြင့်တက် fo, Phillips ကတီဂျေ, ဂရေဟမ် NJ, Ryabinin AE ။ အဆိုပါ Edinger-Westphal-lateral septum urocortin လမ်းကြောင်းနှင့်အရက်သုံးစွဲမှုရန်၎င်း၏ဆက်ဆံရေးမျိုး။ J ကို neuroscience ။ 2003; 23: 2477-2487 ။ [PubMed]
Blomeyer: D, Treutlein J ကို, Esser, G, Schmidt က MH, Schumann, G, အကြား Laucht အမ် Interaction CRHR1 ဗီဇနှင့်စိတ်ဖိစီးမှုဘဝဖြစ်ရပ်များဆယ်ကျော်သက်မိုးသည်းထန်စွာအရက်သေစာအသုံးပြုမှုကိုခန့်မှန်းထားပါတယ်။ Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2008; 63: 146-151 ။ [PubMed]
Bruijnzeel AW, Prado M က, ဣဇာက်အက်စ် Corticotropin-releasing အချက်-1 အဲဒီ receptor activation ဦးနှောက်ဆုလာဘ် function ကိုနှင့်စိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင် relapse အတွက်နီကိုတင်းဆုတ်ခွာ-သွေးဆောင်လိုငွေပြမှု mediates ။ Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2009; 66: 110-117 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Bruijnzeel AW, Zislis, G, Wilson ကနေ C, ရွှေက MS ။ CRF receptors ၏ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ခြင်းကြွက်များတွင်မိုးရွာသွန်းမှုနီကိုတင်းရုပ်သိမ်းရေးနှင့်ဆက်နွယ်ဦးနှောက်ဆုလာဘ် function ကိုအတွက်လိုငွေပြမှုကာကွယ်ပေးသည်။ Neuropsychopharmacology ။ 2007; 32: 955-963 ။ [PubMed]
ချာလ်တန် BG, Ferrier IN, ပယ်ရီ RH အ။ လူ့ဦးနှောက်ထဲမှာ corticotropin-releasing အချက်ကဲ့သို့ immunoreactivity ၏ဖြန့်ဝေ။ Neuropeptides ။ 1987; 10: 329-334 ။ [PubMed]
Childress AR, Ehrman R ကို, McLellan ကို AT, MacRae J ကို, Natale M က, O 'Brien က CP ။ သွေးဆောင်စိတ်ခံစားမှု opiate အလွဲသုံးစားမှုလူနာအတွက်မူးယစ်ဆေး-related တုံ့ပြန်မှုဖြစ်ပေါ်နိုင်သလား? J ကို Subst အလွဲသုံးမှုဆက်ဆံပါ။ 1994; 11: 17-23 ။ [PubMed]
Chu K ကို Koob gf, Cole ကို M က, Zorrilla EP, Roberts သည် AJ ။ ကြွက်များတွင်အီသနော Self-အုပ်ချုပ်ရေးအတွက်မှီခို-သွေးဆောင်တိုးအဆိုပါ CRF ပိတ်ဆို့ထားပါသည်1 အဲဒီ receptor ရန် antalarmin နှင့် CRF အားဖြင့်1 အဲဒီ receptor နောက်ကောက်။ Pharmacol ထဲကဓာတုပစ်စညျးပြုမူနေ။ 2007; 86: 813-821 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Cooney NL, Litt MD, Morse က PA ဆိုပြီး, Bauer LO, Gaupp အယ်လ်အရက် cue reactivity ကိုအနုတ်-စိတ်ဓါတ်များ reactivity ကိုများနှင့်ကုသအရက်သမားယောက်ျားအတွက် relapse ။ J ကိုပုံမှန်မဟုတ်သော Psychol ။ 1997; 106: 243-250 ။ [PubMed]
Dunn AJ, Berridge CW ။ corticotropin-releasing အချက်အုပ်ချုပ်ရေးမှဇီဝကမ္မနှင့်အပြုအမူဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှု: CRF စိုးရိမ်စိတ်သို့မဟုတ်စိတ်ဖိစီးမှုတုံ့ပြန်မှုတစ်ခုအာမခံပါသလဲ ဦးနှောက် Res ဗျာ 1990; 15: 71-100 ။ [PubMed]
Fahlke ကို C, ခက်, E, အီသနောစားသုံးမှု Hansen အက်စ်နည်းပြ corticosterone ၏ intracerebroventricular တာဟာဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ Psychopharmacology ။ 1996; 127: 133-139 ။ [PubMed]
Fekete EM, Zorrilla EP ။ ဇီဝကမ္မဗေဒ, ဆေးဝါးဗေဒနှင့်နို့တိုက်သတ္တဝါများအတွက် urocortins ၏ကုထုံးဆက်စပ်မှု: ရှေးခေတ် CRF paralogs ။ တပ်ဦး Neuroendocrinol ။ 2007; 28: 1-27 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Gehlert DR, Cippitelli တစ်ဦးက, Thorsell တစ်ဦးက, က Le အေဒီ, Hipskind PA ဆိုပြီး, Hamdouchi ကို C, Lu က J ကို, Hembre EJ, Cramer J ကို, သီချင်း M က, McKinzie: D, Morin က M, Ciccocioppo R ကို, Heilig အမ် 3- (4-Chloro-2 -morpholin-4-yl-thiazol-5-yl) -8- (1-ethylpropyl) -2,6-dimethyl-imidazo [1,2-ခ] pyridazine: အတူနှုတ်မရရှိနိုင်ပါ, ဦးနှောက်-ထိုးဖောက်မှုဝတ္ထု corticotropin-releasing အချက်အဲဒီ receptor 1 ရန် အရက်၏တိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်များအတွက်ထိရောက်မှု။ J ကို neuroscience ။ 2007; 27: 2718-2726 ။ [PubMed]
ဂျော့ခ်ျအို Ghozland S က, Azar MR, ဝါဂွမ်း P ကို, Zorrilla EP, Parsons LH, O'Dell LE ရစ်ချတ်ဆင် HN, Koob gf ။ CRF-CRF1 system ကို activation nicotine- မှီခိုကြွက်များတွင်နီကိုတင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးအတွက်ဆုတ်ခွာ-သွေးဆောင်တိုး mediates ။ proc Natl Acad သိပ္ပံယူအက်စ်အေ။ 2007; 104: 17198-17203 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Gilpin ဘရစ်ချတ်ဆင် HN, Koob gf ။ CRF ၏ဆိုးကျိုးများ1အရက်- သာ. နှစ်သက် (P), ကြွက်အားဖြင့်အရက်သောက်ခြင်းအတွက်မှီခို-သွေးဆောင်တိုးအပေါ် -receptor နှင့် opioid- အဲဒီ receptor ရန်။ အရက် Clin Exp Res ။ 2008; 32: 1535-1542 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Greenwell TN, Funk CK, ဝါဂွမ်း P ကိုရစ်ချတ်ဆင် HN, Chen က SA, ဆန် K ကို Zorrilla EP, Koob gf ။ Corticotropin-releasing အချက်-1 အဲဒီ receptor ရန် long- ဘိန်းဖြူ Self-အုပ်ချုပ်မှုလျော့ပေမယ့်မရရေတို access ကိုကြွက်များ။ စှဲလမျးသူ Biol ။ 2009; 14: 130-143 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
ဂွမ်က X, Zhang က R ကို, Xu Y ကိုလီအက်စ်ကင်းဆုတ်ခွာ corticotropin-releasing အချက်အဲဒီ receptor မျိုးကွဲ2များ၏လှုပ်ရှားမှုပြောင်းလဲနေတဲ့မှတဆင့်ကြွက် hippocampus အတွက်ရေရှည်အလားအလာပိုကောင်းစေပါတယ်။ neuroscience ။ 2009; 161: 665-670 ။ [PubMed]
Heimer L ကို, Alheid G. အ Basal forebrain ခန္ဓာဗေဒ၏ပဟေဠိအတူတကွ Piecing ။ ခုနှစ်တွင်: Napier TC, Kalivas PW, Hanin ငါအယ်ဒီတာများ။ အဆိုပါ Basal Forebrain: ခန္ဓာဗေဒ function ရန်။ vol ။ 295 ။ Plenum စာနယ်ဇင်း; နယူးယောက်: 1991 ။ စစ။ 1-42 ။ စီးရီးခေါင်းစဉ်: စမ်းသပ်ဆေးပညာနှင့်ဇီဝဗေဒတိုးတက်လာတာနဲ့အမျှ။
Heinrich SC, Koob gf ။ Corticotropin-releasing ဦးနှောက်ထဲမှာအချက်: activation အတွက်အခန်းကဏ္ဍ, arousal နှင့်စည်းမျဉ်းအကျိုးသက်ရောက်စေသည်။ J ကို Pharmacol Exp Ther ။ 2004; 311: 427-440 ။ [PubMed]
Heinrich SC, Menzaghi က F, Merlo Pich အီး, Baldwin HA, Rassnick S က, Britton KT, Koob gf ။ ကွဲပြားအမျိုးအစားနှင့်ပြင်းထန်မှု၏ဖိအားအမူအကျင့် reactivity ကိုအပေါ်တစ်ဦး corticotropin-releasing အချက်ရန်၏ anti-စိတ်ဖိစီးမှုအရေးယူ။ Neuropsychopharmacology ။ 1994; 11: 179-186 ။ [PubMed]
Hershon HI ။ အရက်ဆုတ်ခွာရောဂါလက္ခဏာတွေနဲ့အရက်သောက်အပြုအမူ။ J ကိုလုံးအရက်။ 1977; 38: 953-971 ။ [PubMed]
ဟို SP, Takahashi LK, Livanov V ကို, Spencer K ကို Lesher T က, Maciag ကို C, Smith ကနေ MA, Rohrbach KW, Hartig PR စနစ်, Arneric SP ။ အချက်-2 အဲဒီ receptor ထုတ်ဦးနှောက် corticotropin ၏ antisense တားစီးနေဖြင့်ကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်အေးစက်၏ attenuation ။ Mol ဦးနှောက် Res ။ 2001; 89: 29-40 ။ [PubMed]
Johnston JB ။ အဆိုပါ forebrain ၏ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်၏လေ့လာမှုမှထပ်မံပံ့ပိုးမှုများကို။ J ကို comp Neurol ။ 1923; 35: 337-481 ။
Koob gf ။ လှုံ့ဆျောမှု၏ Allostatic အမြင်: psychopathology များအတွက်ဂယက်ရိုက်။ ခုနှစ်တွင်: Bevins RA, Bardo MT, အယ်ဒီတာများ။ မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှု၏ Etiology အတွက်စိတ်ခွန်အားနိုးအချက်များ။ vol ။ 50 ။ Nebraska စာနယ်ဇင်းတက္ကသိုလ်; လင်ကွန်း NE: 2004 ။ စစ။ 1-18 ။ စီးရီးခေါင်းစဉ်: Motivation အပေါ် Nebraska စာတမ်းဖတ်ပွဲ။
Koob gf ။ စွဲလမ်းအတွက် amygdala အတွက်ဦးနှောက်ကဖိစီးမှုစနစ်များကို။ ဦးနှောက် Res ။ စာနယ်ဇင်းများတွင် 2009 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Koob gf, Bartfai T က, Roberts သည် AJ ။ corticotropin-releasing အချက်များ၏ neuropharmacology အတွက်မော်လီကျူးဗီဇချဉ်းကပ်မှုများအသုံးပြုမှု။ int J ကို comp Psychol ။ 2001; 14: 90-110 ။
Koob gf, Heinrich SC ။ ဖိအားအပြုအမူတုံ့ပြန်မှုအတွက် corticotropin-releasing အချက်နှင့် urocortin တစ်အခန်းကဏ္ဍ။ ဦးနှောက် Res ။ 1999; 848: 141-152 ။ [PubMed]
Koob gf, Heinrich SC, Menzaghi က F, Pich EM, Britton KT ။ Corticotropin အချက်, စိတ်ဖိစီးမှုနှင့်အပြုအမူလွှတ်။ နှီးနှောဖလှယ်ပွဲ neuroscience ။ 1994; 6: 221-229 ။
Koob gf, Le Moal အမ်မူးယစ်ဆေးစွဲခြင်းနှင့် allostasis ။ ခုနှစ်တွင်: Schulkin J ကို, အယ်ဒီတာ။ Allostasis, Homeostasis နှင့်ဇီဝလိုက်လျောညီထွေ၏ကုန်ကျစရိတ်များ။ ကင်းဘရစ်တက္ကသိုလ်ကစာနယ်ဇင်း; နယူးယောက်: 2004 ။ စစ။ 150-163 ။
Koob gf, ဆုလာဘ် neurocircuitry နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးစွဲလမ်း၏အမှောင်ဘက်ခြမ်း၏က Le Moal အမ်ပလပ်စတစ်။ နတ် neuroscience ။ 2005; 8: 1442-1444 ။ [PubMed]
Kozicz တီအာရုံခံ urocortin နှင့်ကိုကင်း colocalizing နှင့်စိတ်ကြွဆေး-စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်မှတ်တမ်း immunoreactivities ကြွက်များတွင် Edinger-Westphal နျူကလိယထဲမှာစူးရှ lipopolysaccharide စိတ်ဖိစီးမှုများကသွေးဆောင်နေကြသည်။ neuroscience ။ 2003; 116: 315-320 ။ [PubMed]
le အေဒီမာက S, Juzytsch W က, Watchus J ကို, Shalev ဦး, Shaham Y. ကြွက်များတွင်အရက်-ရှာကြံအပြုအမူမှစိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင် relapse အတွက် corticotrophin-releasing အချက်များ၏အခန်းကဏ္ဍကို။ Psychopharmacology ။ 2000; 150: 317-324 ။ [PubMed]
Lewis ကငွေကျပ်လီကို C, Perrin MH, Blount တစ်ဦးက, Kunitake K ကို Donaldson ကို C, Vaughan J ကို, Reyes TM, Gulyas J ကို, Fischer W က, Bilezikjian L ကို, Rivier J ကို, Sawchenko PE, ခြိုငျ့ WW ။ urocortin III ၏ identification, အ corticotropin-releasing အချက် (CRF) ကို CRF2 အဲဒီ receptor အဘို့အမြင့်မားသောဆှဖှေဲ့နှင့်အတူမိသားစုတစ်ခုအပိုဆောင်းအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦး။ proc Natl Acad သိပ္ပံယူအက်စ်အေ။ 2001; 98: 7570-7575 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
လီကို C, Vaughan J ကို, Sawchenko PE, ခြိုငျ့ WW ။ ကြွက်ဦးနှောက်ထဲမှာ Urocortin III ကို-immunoreactive စီမံချက်များ: type ကို2corticotrophin-releasing အချက်အဲဒီ receptor ထုတ်ဖော်က်ဘ်ဆိုက်များနှင့်အတူတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းထပ်။ J ကို neuroscience ။ 2002; 22: 991-1001 ။ [PubMed]
လျူ J ကို, ယု B, Orozco-Cabal L ကို, Grigoriadis DE, Rivier J ကို, ခြိုငျ့ WW, Shinnick-Gallagher P ကို, Gallagher JP ။ နာတာရှည်ကင်းအုပ်ချုပ်ရေး corticotropin-releasing အချက် switches2 အဆိုပါနှစ်ဦးနှစ်ဖက် septum အတွက် glutamatergic ဂီယာ၏ပံ့ပိုးဖို့အဲဒီ receptor-mediated စိတ်ကျရောဂါ။ J ကို neuroscience ။ 2005; 25: 577-583 ။ [PubMed]
Lowman ကို C, Allen က J ကို, ရဲရငျ့စှာပွော RL ။ ပွားနှင့် relapse မိုးရွာသွန်းမှု၏ Marlatt ရဲ့ taxonomy ၏ extension ကို: လုပျထုံးလုပျနညျးမြားနှငျ့ရလဒျမြား၏ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်။ အဆိုပါ Relapse သုတေသနအုပ်စုစွဲ။ 1996; 91 (ပျော့ပျောင်း): s51-s71 ။ [PubMed]
Marinelli PW, Funk: D, Juzytsch W က, Hard S က, ဆန် KC, Shaham Y ကို, Le အေဒီ။ အဆိုပါ CRF1 အဲဒီ receptor ရန် antalarmin အော်ပရေတာအရက် Self-အုပ်ချုပ်ရေးနှင့်ကြွက်များအတွက်ရှာကြံအရက်၏ reinstatement အတွက် yohimbine-သွေးဆောင်တိုး attenuates ။ Psychopharmacology ။ 2007; 195: 345-355 ။ [PubMed]
Marlatt, G, relapse ၏ဂေါ်ဒွန်ဂျေစိတ်ပိုင်းဖြတ်: အပြုအမူပြောင်းလဲမှု၏ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအဘို့အဂယက်ရိုက်။ ခုနှစ်တွင်: Davidson P ကို, Davidson က S, အယ်ဒီတာများ။ အမူအကျင့်ဆေးပညာ: ကနျြးမာရေးလူနေမှုပုံစံပြောင်းခြင်း။ Brunner / မာဇယ်လ်၏; နယူးယောက်: 1980 ။ စစ။ 410-452 ။
Menzaghi က F, Howard RL, Heinrich SC, ခြိုငျ့ W က, Rivier J ကို, Koob gf ။ ကြွက်များတွင်ဝတ္ထုနှင့်အစွမ်းထက် corticotropin-releasing အချက်ရန်၏စရိုက်လက္ခဏာတွေ။ J ကို Pharmacol Exp Ther ။ 1994; 269: 564-572 ။ [PubMed]
O'Dell LE, Roberts သည် AJ, Smith က RT ကို, Koob gf ။ စဉ်ဆက်မပြတ်အရက်ငွေ့ထိတွေ့မှု, အရက်သာရှိပြီးပြည်ပမှပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းအပြီးအရက် Self-အုပ်ချုပ်ရေး Enhanced ။ Clin Exp Res ။ 2004; 28: 1676-1682 ။ [PubMed]
Papaleo က F, Ghozland S က, Ingallinesi M က, Roberts သည် AJ, Koob gf, အ CRF ၏ Contarino အေ Disruption2 အဲဒီ receptor လမ်းကြောင်း opiate ဆုတ်ခွာ၏ somatic စကားရပ်လျော့နည်းစေပါသည်။ Neuropsychopharmacology ။ 2008; 33: 2678-2887 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
သင်းအုပ်ဆရာ R ကို, McKinnon CS, Scibelli AC အ, Burkhart-Kasch S က, ရိဒ်, C, Ryabinin AE, ကုန်ကျစရိတ် SC, Stenzel-ညံ့ဖျင်းအမတ်, Phillips ကတီဂျေ။ အီသနောမှအမူအကျင့် neuroadaptation အတွက် Corticotropin-releasing အချက်-1 အဲဒီ receptor ပါဝင်ပတ်သက်မှု: တစ် urocortin1-လွတ်လပ်သောယန္တရား။ proc Natl Acad သိပ္ပံယူအက်စ်အေ။ 2008; 105: 9070-9075 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Pelleymounter MA, ယုပ္ပေ M က, Carmouche M က, Cullen က MJ, Brown က B, Murphy က B, Grigoriadis DE, လိန်း N ကို, Foster AC အ။ corticotropin-releasing အချက် (CRF) ၏အခန်းက္ပ CRF အားဖြင့်သွေးဆောင်အဆိုပါလာဖို့ syndrome ရောဂါအတွက် receptors ။ J ကို Pharmacol Exp Ther ။ 2000; 293: 799-806 ။ [PubMed]
Piazza PV, Deroche V ကို, Deminiere JM, Maccari S က, က Le Moal က M ရှိမုန်အိပ်ချ် Corticosterone စိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင်အဆင့်ဆင့်၏အကွာအဝေးအတွင်းဂုဏ်သတ္တိများအားဖြည့်ပိုင်ဆိုင်: အာရုံ-ရှာကြံအပြုအမူတွေများအတွက်သက်ရောက်မှုတွေ, proc ။ Natl Acad သိပ္ပံယူအက်စ်အေ။ 1993; 90: 11738-11742 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Piazza PV, Le Moal အမ် Glucocorticoids ဆုလာဘ်တစ်ခုဇီဝအလွှာအဖြစ်: ဇီဝကမ္မနှင့် pathophysiological ဂယက်ရိုက်။ ဦးနှောက် Res ဗျာ 1997; 25: 359-372 ။ [PubMed]
Reyes TM, Lewis ကငွေကျပ်, Perrin MH, Kunitake KS, Vaughan J ကို, Aria, CA, Hogenesch JB, Gulyas J ကို, Rivier J ကို, ခြိုငျ့ WW, Sawchenko PE ။ Urocortin II ကို: အ corticotropin-releasing အချက်အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးရွေးချယ်အမျိုးအစား2CRF receptors အားဖြင့်ချည်နှောင်လျက်ကြောင်း (CRF) neuropeptide မိသားစု, proc ။ Natl Acad သိပ္ပံယူအက်စ်အေ။ 2001; 98: 2843-2848 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
ရစ်ချတ်ဆန် HN, Zhao နှင့် Y ကို, Fekete EM, Funk CK, Wirsching P ကို, Janda KD, Zorrilla EP, Koob gf ။ MPZP: အချက်အမျိုးအစား 1 အဲဒီ receptor လွှတ် corticotropin- တစ်ဝတ္ထုသေးငယ်တဲ့မော်လီကျူး (CRF1) ရန်။ Pharmacol ထဲကဓာတုပစ်စညျးပြုမူနေ။ 2008; 88: 497-510 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
ရစ်ချတာ RM, Zorrilla EP, Basso လေး, Koob gf, Weiss အက်ဖ် ALTER amygdalar CRF လွှတ်ပေးရန်နှင့် Sardinian အရက်- သာ. နှစ်သက်ကြွက်များတွင်တိုးမြှင့်စိုးရိမ်စိတ်ကဲ့သို့သောအပြုအမူ: တစ် microdialysis နှင့်အပြုအမူဆိုင်ရာလေ့လာမှု, အရက်။ Clin Exp Res ။ 2000; 24: 1765-1772 ။ [PubMed]
Ryabinin AE, သွပ်ရည်စိမ်-Rosa တစ်ဦးက, Bachtell RK, မြင့်တက် fo ။ hippocampus ၏ပါဝင်ပတ်သက်မှု, နှစ်ဦးနှစ်ဖက် septum နှင့် Edinger-Westphal နျူကလိယ၏ urocortin-အပြုသဘောဆဲလ်: C57BL / 6J ကြွက်လည်းမှောင်မိုက်ခန္ဓာကိုယ်ထဲက Circadian အဆင့်ကာလအတွင်းအမြင့်အရက် / sucrose စားသုံးမှု။ Psychopharmacology ။ 2003; 165: 296-305 ။ [PubMed]
Ryabinin AE, Weitemier AZ ။ အဆိုပါ urocortin 1 neurocircuit: အီသနော-sensitivity ကိုနှင့်အရက်သုံးစွဲမှုအတွက်အလားအလာပါဝင်ပတ်သက်မှု။ ဦးနှောက် Res ဗျာ 2006; 52: 368-380 ။ [PubMed]
Ryabinin AE, Yoneyama N ကို, Tanchuck MA, မာကုမိသားစုဆရာဝန်, ဖင်လန် DA ။ မောက်နှစ်ဦးနှစ်ဖက် septum သို့ Urocortin 1 microinjection အရက်သောက်များ၏ဝယ်ယူခြင်းနှင့်စကားရပ်ကိုထိန်းညှိ။ neuroscience ။ 2008; 151: 780-790 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Sabino V ကို, ဝါဂွမ်း P ကို, Koob gf, Steardo L ကို, Lee က MJ, ဆန် KC, Zorrilla EP ။ Sardinian အရက်- သာ. နှစ်သက်ကြွက်များတွင် opioid နှင့် CRF1 ရန်အထိခိုက်မခံသောက်သုံးရေအကြား Dissociation ။ Psychopharmacology ။ 2006; 189: 175-186 ။ [PubMed]
Schmid B, Blomeyer: D, Treutlein J ကို, Zimmermann အမေရိကန်, ဘက်ချမန်း AF, Schmidt က MH, Esser, G, Rietschel M က, Banaschewski T က, Schumann, G, Laucht အမ်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်ခြင်းသက်ရောက်မှုများ CRHR1 ဗီဇနှင့် 19 နှစ်အရွယ်အကြားအရက်သောက်စတင်များနှင့်တိုးတက်မှုအပေါ်ဖြစ်ရပ်များကဲ့သို့အစိတ်ဖိစီးမှု။ int J ကို Neuropsychopharmacol 2009 ။ စာနယ်ဇင်းများတွင် 2009 ။ [PubMed]
Shaham Y ကို, Erb S က, Leung က S, Buczek Y ကို, Stewart ကဂျေက CP-154,526, အ corticotropin-releasing factor1 အဲဒီ receptor ၏တစ်ဦးရွေးချယ် non-peptide ရန် cocaine- နှင့်ဘိန်းဖြူ-လေ့ကျင့်သင်ကြားကြွက်များတွင်ရှာကြံမူးယစ်ရန်စိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင် relapse attenuates ။ Psychopharmacology ။ 1998; 137: 184-190 ။ [PubMed]
Shaham Y ကို, Shalev ဦး, Lu က L ကို, က de ကျေး H ကို, Stewart ကဂျေမူးယစ်ဆေး relapse ၏ reinstatement မော်ဒယ်: သမိုင်း, နည်းစနစ်နှင့်အဓိကတွေ့ရှိချက်များ။ Psychopharmacology ။ 2003; 168: 3-20 ။ [PubMed]
ရှပ် AL, ကုန်ကျစရိတ် SC, Burkhart-Kasch S ကလီ N ကို, Stenzel-ညံ့ဖျင်းအမတ်, Phillips ကတီဂျေ။ corticotropin-releasing အချက်အဲဒီ receptor အမျိုးအစား2အတွက်လစ်လပ်ကြွက်ပုံမှန်အီသနော-ဆက်စပ်အပြုအမူတွေကိုပြ။ အရက် Clin Exp Res ။ 2005; 29: 1601-1609 ။ [erratum: 32, 2028] [PubMed]
ရှပ် AL, Phillips ကတီဂျေ။ ဗဟို urocortin3အုပ်ချုပ်ရေး nondependent ကြွက်တွေအတွက်ကန့်သတ်-access ကိုအီသနောစားသုံးမှုလျော့နည်းစေပါသည်။ ပြုမူနေ Pharmacol ။ စာနယ်ဇင်းများတွင် 2009 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Sinha R ကို, ဖျူး T က, Aubin LR, O'Malley အက်စ်အက်စ်။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ဖိစီးမှု, မူးယစ်ဆေး-related တွေကိုနှင့်ကင်းတပ်မက်။ Psychopharmacology ။ 2000; 152: 140-148 ။ [PubMed]
Skelton KH, Gutmans DA, Thrivikraman ကေဗွီ, Nemeroff သမဝါယမ, Owen MJ ။ အဆိုပါ CRF1 အဲဒီ receptor ရန် R121919 အဆိုပါ neuroendocrine နှင့်မိုးရွာသွန်းမှု lorazepam ဆုတ်ခွာ၏အမူအကျင့်အပေါ်သက်ရောက်မှုများ attenuates ။ Psychopharmacology ။ 2007; 192: 385-396 ။ [PubMed]
Smith က SM, ခြိုငျ့ WW ။ စိတ်ဖိစီးမှုမှ neuroendocrine တုံ့ပြန်မှုအတွက် hypothalamic-pituitary-adrenal ဝင်ရိုး၏အခန်းကဏ္ဍကို။ Dialog ကို Clin neuroscience ။ 2006; 8: 383-395 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Sommer WH, Rimondini R ကို, Hansson AC အ, Hipskind PA ဆိုပြီး, Gehlert DR, ဘား CS, Heilig MA ။ မိမိဆန္ဒအလျောက်အရက်စားသုံးမှု, စိတ်ဖိစီးမှုမှအမူအကျင့် sensitivity ကိုနှင့် amygdala ၏ Upregulation crhr1 မှီခိုနေတဲ့သမိုင်းကိုအောက်ပါစကားရပ်။ Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2008; 63: 139-145 ။ [PubMed]
Spangler အီး, Cote DM, Anacker လေး, မာကုမိသားစုဆရာဝန်, Ryabinin AE ။ ကြွက်နှင့်ကြွက်များတွင်အီသနော, psychostimulants နှင့်စိတ်ဖိစီးမှုဖို့ perioculomotor urocortin ပါဝင်သောအာရုံခံ၏ differential sensitivity ကို။ neuroscience ။ 2009; 160: 115-125 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Spina M က, Merlo-Pich အီးချမ်း RKW, Basso လေး, Rivier J ကို, ခြိုငျ့ W က, Koob gf ။ urocortin ၏အစာစားချင်စိတ်-နှိပ်ကွပ်သက်ရောက်မှုတစ်ခု CRF-related neuropeptide ။ သိပ္ပံ။ 1996; 273: 1561-1564 ။ [PubMed]
Spina MG, Basso လေး, Zorrilla EP, Heyser CJ, Rivier J ကို, ခြိုငျ့ W က, Merlo-Pich အီး, Koob gf ။ ကြွက်များတွင်ဝတ္ထု CRF ရန် astressin ၏ဗဟိုအုပ်ချုပ်ရေးအမူအကျင့်အပေါ်သက်ရောက်မှုများ။ Neuropsychopharmacology ။ 2000; 22: 230-239 ။ [PubMed]
Takahashi LK, Ho SP, Livanov V ကို, Graciani N ကို, Arneric SP ။ CRF ၏ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ခြင်း2 receptors စိုးရိမ်စိတ်၏တိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်များအတွက် anxiolytic အပြုအမူထုတ်လုပ်သည်။ ဦးနှောက် Res ။ 2001; 902: 135-142 ။ [PubMed]
Treutlein J ကို, Kissling ကို C, ဖရန့် J ကို, Wiemann S ကသည် Dong L ကို, Depner M က, Saam ကို C, Lascorz J ကို, Soyka M က, Preuss UW, Rujescu: D, Skowronek MH, Rietschel M က, Spanagel R ကို, Heinz တစ်ဦးက, Laucht M က, မန်း K သည် နှစ်ခုလွတ်လပ်သောနမူနာထဲမှာမူးရူးသောက်စားခြင်းနှင့်အရက်စားသုံးမှုပုံစံများနှင့်အတူဟော်မုန်းအဲဒီ receptor 1 (CRHR1) ထုတ်လူ့ corticotropin ၏, Schumann G. အမျိုးဗီဇအသင်းအဖွဲ့။ Mol စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2006; 11: 594-602 ။ [PubMed]
Turek, VF, Tsivkovskaia NO, Hyytia P ကို, Hard S က, Le အေဒီ, Ryabinin AE ။ ရွေးချယ်အရက်သေစာသောက်သုံးအတွက်ကွဲပြားမှုအဘို့အရပ်ကြီးကြွက်လိုင်းများငါးခုအားလုံးအတွက် Urocortin 1 စကားရပ်။ Psychopharmacology ။ 2005; 181: 511-517 ။ [PubMed]
ခြိုငျ့ W က, Spiess J ကို, Rivier ကို C, corticotropin နှင့် beta ကို-နဲ့အတူ Endorphins ၏လျှို့ဝှက်ချက်များကိုလှုံ့ဆော်တဲ့ 41-ကျန်ကြွင်း ovine hypothalamic peptide ၏ Rivier ဂျေစရိုက်လက္ခဏာတွေ။ သိပ္ပံ။ 1981; 213: 1394-1397 ။ [PubMed]
ဝမ် B, Shaham Y ကို, Zitzman: D, Azari က S, ပညာရှိ RA, သင် ZB ။ မူးယစ်ဆေးရှာဖို့စိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင် relapse အတွက်အခန်းကဏ္ဍ: ကင်းအတွေ့အကြုံကို corticotropin-releasing အချက်အားဖြင့် midbrain အချိုမှုများနှင့် dopamine ထိန်းချုပ်တည်စေ။ J ကို neuroscience ။ 2005; 25: 5389-5396 ။ [PubMed]
ဝမ် B က, သင် ZB, ဆန် KC, ပညာရှိ RA ။ ကိုကင်းရှာဖို့စိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင် relapse: အ CRF များအတွက်အခန်းကဏ္ဍ2 ကြွက်များ၏ ventral tegmental ဧရိယာထဲမှာအဲဒီ receptor နှင့် CRF-စည်းနှောင်ပရိုတိန်း။ Psychopharmacology ။ 2007; 193: 283-294 ။ [PubMed]
Weiss က F, Ciccocioppo R ကို, Parsons LH, Katner S ကိုလျူက X, Zorrilla EP, Valdez ထဲ၌အလင်းကိုထွန်းလင်း, ဘင်-ရက်ရှာဟာအို Angeletti S က, ရစ်ချတာ RR ။ compulsive မူးယစ်ဆေး-ရှာကြံအပြုအမူနှင့် relapse: neuroadaptation, စိတ်ဖိစီးမှုနှင့်အေးစက်အချက်များ။ ခုနှစ်တွင်: Quinones-Jenab V ကို, အယ်ဒီတာ။ ကိုကင်းစွဲ၏ဇီဝအခြေခံ။ vol ။ 937 ။ သိပ္ပံနယူးယောက်အကယ်ဒမီ; နယူးယောက်: 2001 ။ စစ။ 1-26 ။ စီးရီးခေါင်းစဉ်: သိပ္ပံ၏နယူးယောက်အကယ်ဒမီ၏ရာဇဝင်။ [PubMed]
Zorrilla EP, Koob gf ။ ဦးနှောက်ထဲမှာ urocortins 1,2နှင့်3၏အခန်းကဏ္ဍ။ ခုနှစ်တွင်: Steckler T က, Kalin နယူးဟမ်းရှား, Reul JMHM, အယ်ဒီတာများ။ စိတ်ဖိစီးမှုနှင့်ဦးနှောက်၏လက်စွဲစာအုပ်။ vol ။ 15 ။ Elsevier သိပ္ပံ; နယူးယောက်: 2005 ။ စစ။ 179-203 ။ စီးရီးခေါင်းစဉ်: အမူအကျင့်များနှင့်ဦးနှောက်ကဲ့သို့ရှုပ်ထွေးသောသိပ္ပံအတွက် Techniques ။
Zorrilla EP, ရွှေချောင်း Y ကို, Koob gf ။ နို့တိုက်ကျွေးခြင်းနှင့် gastrocolonic Motilal ၏ CRF အဲဒီ receptor ထိန်းချုပ်မှုမှာ Nibbling ။ ခေတ်ရေစီးကြောင်း Pharmacol သိပ္ပံ။ 2003; 24: 421-427 ။ [PubMed]
Zorrilla EP, Valdez ထဲ၌အလင်းကိုထွန်းလင်း, မှီခိုကြွက်များတွင်အလွန်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီးမူးယစ်ဆေးဆုတ်ခွာစဉ်ကာလအတွင်းဒေသဆိုင်ရာ CRF ကဲ့သို့-immunoreactivity နှင့် plasma corticosterone ၏အဆင့်ဆင့်အတွက် Weiss အက်ဖ်အပြောင်းအလဲများ။ Psychopharmacology ။ 2001; 158: 374-381 ။ [PubMed]
Zorrilla EP, Zhao နှင့် Y ကို, Koob gf ။ anti-CRF ။ ခုနှစ်တွင်: က Fink H ကို, အယ်ဒီတာ။ စိတ်ဖိစီးမှု၏စွယ်စုံကျမ်း။2။ vol ။ 1 ။ Elsevier; အမ်စတာဒမ်: 2007 ။ စစ။ 206-214 ။ AE ။
Zywiak WH, Connor GJ, Maisto လုပ် SA, Westerberg vs. Relapse သုတေသနနှင့်မေးခွန်းလွှာသောက်သုံးများအတွက်အကြောင်းရင်း: Marlatt ရဲ့ relapse taxonomy ၏အချက်တစ်ခုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ။ စွဲလမ်း။ 1996; 91 (ပျော့ပျောင်း): s121-s130 ။ [PubMed]